အပတျစဉျသတငျး စုစညျးဖျောပွခွငျး အပတ်စဉ်သတင်း စုစည်းဖော်ပြခြင်း – Federal Journal
အပတျစဉျသတငျး စုစညျးဖျောပွခွငျး အပတ်စဉ်သတင်း စုစည်းဖော်ပြခြင်း
(No. 16, April 14, 2020)
၁။ RCSS/SSA ကိုဗစ် တိုက်ဖျက်ရေး ဆေးတပ်အား အစိုးရတပ် လိုက်လံတိုက်ခိုက်
၂။ လူမျိုးနှင့် ဒေသစွဲမထားဘဲ ကျန်းမာရေး အသိပေးညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာကြရန် KNU တိုက်တွန်း
၃။ ချင်းပြည်နယ်ဆမီးမြို့က စစ်ဘေးရှောင် သုံးထောင် ရေအခက်အခဲဖြစ်နေ
၄။ မွန်ပြည်နယ်တွင် ဆေးရုံ Quarantine ဝင် ထိုင်းပြန် ၃ ဦး သေဆုံး
၅။ လူထုဆန္ဒအတိုင်း မဲဆန္ဒနယ်မ ထပ်အောင် ကြိုးပမ်းမည်ဟု ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင် ၂ ပါတီပြော
၆။ ပလက်ဝမြို့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတဦးကို အေအေအဖွဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
၇။ မွန် မှာ စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာတွေက စောင့်ကြည့်ရက် ၁၄ ရက် မပြည့်သေးသူတွေ အပါအဝင် အားလုံးကို ပြန်လွှတ်
၈။ ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် လက်နက်ကြီးကျည်ထိ၍ မိန်းကလေးအပါအဝင် ၉ ဦး သေဆုံး၊ ၆ ဦး ဆေးကုသမှု ခံယူနေ
၉။ မူဆယ်မြို့ရှိ MPT ရုံးအား လက်ပစ်ဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဖြင့် ပစ်ဖောက်ခံရ
၁၀။ မော်ချီး Quarantine စင်တာတွင် လက်ဆေးရည်၊ စောင်၊ ခေါင်းအုံးများမရှိ
၁၁။ ဥရုချောင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားဝင် ရွှေတူးဖော်နေမှုကို ဒေသခံတစ်ချို့သဘောမတူ
၁၂။ တိုက်ပွဲများရပ်ပြီး COVID-19 အရေး ပူးပေါင်းရန် ALP တိုက်တွန်း
၁၃။ တောင်ကြီးမြို့ ညောင်ရွှေဟော်ကုန်း ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေသုံးခုနှင့် လမ်းသုံးခုတို့ကို ဆေးဖြန်းပြီး ၂၁ ရက် Lockdown ပြုလုပ်ထား
၁၄။ ဖားကန့်မြို့ အဝင်အထွက်ကို စတင်စစ်ဆေးတော့မည်ဟု ပြည်နယ်အစိုးရပြော
၁၅။ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ညောင်သာယာကျေးရွာတွင် ပဋ္ဌာန်းသိမ်းပွဲ၌ ခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် ရေခဲမုန့် ကျွေးမွေးရာမှ ရဟန်း၊ သာမဏေနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသား ၄၀ ကျော် အစာ အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား
၁၆။ သျှမ်းပြည်တွင် ဒုတိယမြောက် ကိုဗစ် လူနာ တောင်ကြီးသားဖြစ်
၁၇။ COVID-19 ကြောင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ထိခိုက်မည်ကို RCSS စိုးရိမ်
၁၈။ ကပ်ရောဂါဘေး ကာလကြီးမှာ စည်းလုံးညီညွတ်ကြဖို့ ကက်သလစ် ရဟန်းမင်းအမတ် တိုက်တွန်း
၁၉။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ဦး၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားချက်သည်​ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်း ကွဲစေ သ ည်ဟု ဆိုကာ အရေးယူပေးရန် လင်းခေးမြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဝန်ကြီးချုပ်ထံတိုင်ကြား
၂၀။ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများ ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် ND-Burma တောင်းဆို
၂၁။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုအားနည်း၍ ကပ်တဲလ်ကျေးရွာ ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ
၂၂။ ကွတ်ခိုင်တွင်ရက်ဆက် မူးယစ်ဆေး ဖမ်းမိ တရားခံ မမိ
၂၃။ မြန်မာပိုင်နက်ထဲ တရားမဝင် ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှစက်လှေများကို သတိပေး ပစ်ခတ်ခဲ့ရ
၂၄။ Covid-19 တိုက်ဖျက်ရေး ကချင်အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
၂၅။ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ရာဘာတောထဲ သောင်တင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၀၀ ကျော်အား သွားရောက်ခေါ်ယူ
သျှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း မိုင်းပန်မြို့နယ်အတွင်း ကိုဗစ် ၁၉ နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျေးလက်အတွင်း ကွင်းဆင်းဆေးစစ်မှု ပေးနေ သော RCSS/SSA တပ်နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဧပြီလ ၁၂ ရက် ညနေ ၃ နာရီဝန်းကျင်က မိုင်းပန်မြို့နယ် နားဝန်ကျေးရွာအနီးတွင် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည် တပ်မတော်( RCSS/SSA)နှင့် အစိုးရတပ်မတော်တို့ ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာ ထိတွေ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း RCSS/SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အုမ်ခေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောသည်။
“ ထိတွေ့မှုဖြစ်တာပါ။ ၁၅ မိနစ်ပါပဲ။ အစိုးရ တပ်ကကျနော်တို့ ဆက်ဆံရေးရုံးကို သတင်းမပို့ဘဲ သွားချင်တိုင်းသွားတော့ ကျနော်တို့ တပ်နဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်သွားတာပါ” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းအုမ်ခေး က ဆိုသည်။ RCSS/SSA နှင့် ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွါးခဲ့ သော အစိုးရတပ်မတော်သည် မိုင်းပန်မြို့နယ် နားဝန်ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်းပက်ရွာနှင့်နောင်လေရွာအကြား အခြေစိုက်သည့် ရလခတိုင်း လက်အောက်ခံ ခမရ ၁၅၃ တပ်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတပ်သည် ဧပြီလဆန်းကတည်းက ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ ကိုဗစ် ၁၉ နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆေးစစ်မှု၊ ကူညီ ထောက်ပံ့မှုပေးနေသည့် RCSS/SSA ၏ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အား လိုက်လံဟန့်တားနေသောတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွာသားများ အားလည်း ဆေးစစ်မှုလက်မခံရန် တားမြစ်သည်ဟု RCSS/SSA ဘက်က ပြောပါသည်။ https://burmese.shannews.org/ archives/16139
နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသည့်အပေါ် လူမျိုးနှင့် ဒေသစွဲမထားကြဘဲ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဌာနများ၏ အသိပေးညွှန်ကြားချက်များကို အလေးထားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် ဧပြီ ၉ ရက်နေ့က ကရင်ပြည် နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် KNU-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ မွန်-ကရင်ပူးတွဲအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေက အသိပေးစာ ထုတ်ပြန် လိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ပြည်ပမှ ပြန်လာသူများ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်များအပေါ် လိုက်နာနေထိုင်သွား ရန်နှင့် အခက်အခဲရှိလာပါက မွန်-ကရင်ပူးတွဲ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာဂိတ်စခန်းများတွင် အကူအညီ တောင်းခံ နိုင်သည်ဟု ၎င်းတို့၏ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ KNU ဒူးပလာယာခရိုင် ဝင်းရေးမြို့နယ် မွန်-ကရင်ပူးတွဲ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေ ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောဝါးတားတားက “ KNU ဗဟိုက ချမှတ်ထားတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါ အသိပေး လက်ကမ်းစာစောင် တွေ ရွာတွေမှာ လိုက်ကပ်ထားပေးတယ်။ ရွာတွေမှာ အခက်အခဲဖြစ်လာရင် ကျနော်တို့ကို အချိန်မရွေး အကူအညီတောင်းနိုင် တယ်ပေါ့နော်။ ဒီအချိန်မှာ မွန်တွေ၊ ကရင်တွေ ဒေသစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲထက် လူသားဝါဒတစ်ခုထဲနဲ့ ဒီရောဂါကြီးကို ပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်သွားဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်”ဟု ဧပြီ ၉ ရက်နေ့က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ရှိ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် KNU အဖွဲ့တို့ ပူးတွဲအုပ်ချုပ်သည့် တောင်ပေါက်နယ်မြေများတွင် ကရင်၊ ပအိုဝ်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ လောရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည့် နယ်မြေလည်းဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအသီးသီးတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မှ ပြန်လာ သူ ၃၇ဝ ဦးကို သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများတွင် စောင့်ကြည့်ထားရှိသည်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီထံမှ သိရသည်။ ပြည်ပမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများကို သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများတွင် ၁၄ ရက်ကြာ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ် စည်းမျဉ်းများ လိုက်နာမှုမရှိသူများကို အရေးယူခံရမည်ဟု KNU ဝင်းရေးမြို့နယ်က ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၅ရက်နေ့က ကြေညာ ချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%8 0%99%e1%80%b a%e1%80%ad%e1%80
ချင်းပြည်နယ် ဆမီးမြို့မှာတော့ တပ်မတော်နဲ့ AA တို့ရဲ့ ပလက်ဝတိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့သူ သုံးထောင်ရှိ နေပြီ ဖြစ်ပြီး သောက်သုံးရေအခက်အခဲရှိနေကြောင်း ဆမီးမြို့ဒေသခံတစ်ဉီးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ ဆမီးမြို့ဒေသခံက “စားနပ် ရိက္ခာကတော့ အလှူရှင်တွေက ပံ့ပိုးပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟင်းစားတော်တော်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ပြီးရင်ရေပြဿနာ ရှိ တယ်။ ရေပြဿနာဆိုတာက အဲ့ဒီအနီးအနားကမြစ်ချောင်းတစ်ချောင်းကိုပဲ အားလုံးက သောက်သုံးနေကြတာဆိုတော့ အဲ့ဒီ ရေက သန့်ရှင်းတဲ့ရေမဟုတ်ဘူး။”ဟုပြောသည်။
မတ်လအကုန်က ဆမီးမြို့ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ လူ ၃၀ဝ လောက် ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ပြီးနောက် ယခု ဧပြီလတွင်း စစ်ဘေးရှောင်သူဦးရေ ပြန်လည်တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာ အိမ်သာအခက်အခဲလည်း ဖြစ်နေကြောင်း ဒေသခံကပြောသည်။ “ပြဿနာက အိမ်သာဆောက်မယ့်နေရာပြဿနာ အများဆုံးပဲ။ အိမ်သာကေ ရေလောင်းအိမ်သာ ဆိုနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျာ။ ရေလောင်းအိမ်သာဆောက်ဖို့က အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ ပြီးရင် အိမ်သာ ခွက်တွေကလည်း အခက်အခဲရှိတယ်။”ဟုပြောသည်။
လက်ရှိမှာလည်း COVID-19 ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေးရှောင်ရချိန်မှာ ထိုစစ်ဘေးရှောင် စခန်းတွေမှာ လူအယောက် ၃၀ဝ၀ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ရေအခက်အခဲကြောင့်လည်း လက်ကို အချိန်တိုင်းမဆေးနိုင်သလို မျက်နှာဖုံး (Mask)တွေမှာ လည်း မလုံလောက်ဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဒေသခံကပြောသည်။ “COVID-19 ကာကွယ်ဖို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး mask ဆိုလည်းမရှိ ဘူး။ လက်ဆေးရည်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကလူတွေဆီမှာ ရှိမနေဘူး။ လက်တွေဘာတွေ ခဏခဏ ဆေးဖို့ဆိုရင် ရေတွေလည်း မရှိတာဖြစ်တယ်။ ပြီးရင်ရေအခက်အခဲလည်းဖြစ်တယ်။”ဟုပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ် ဆမီးမြို့မှာတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ငါး ခု ရှိပြီး စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေထဲမှာ အများစုက ကလေးတွေ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိကာလဟာ COVID-19 ရောဂါကာလဖြစ်သော်လည်း ချင်းပြည်နယ်ဘက်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကြားမှာတော့ တပ်မတော်နဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ AA တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး ဧပြီ ၉ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက်နေ့ မှာလည်း ဆမီးနဲ့ ပလက်ဝကြားမှာ ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/68904
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် သွားရောက်အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အများဆုံးပြန်လာသည့် ပြည်နယ်တခု ဖြစ် သော မွန်ပြည်နယ်တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဆေးရုံ Quarantine ဝင်နေသူ ၃ ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါက လူနာ ၃ ဦးသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာသူများဖြစ်ပြီး မွန်ပြည်နယ် သံဖြူဇရပ် တွင် ၂ ဦး နှင့် သထုံ တွင် ၁ ဦး တို့ ဖြစ်ကြောင်း ယင်းမြို့များမှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ဧရာဝတီ သို့ အတည်ပြုသည်။ သထုံမြို့မှ သေဆုံးသွား သော လူနာအမျိုးသားသည် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာသူဖြစ်ပြီး ရက် ၂၀ ကျော် ကြာမှ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဆေးရုံသို့ အချိန်မှီမရာက်ရှိခြင်းကြောင့် သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သထုံ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၂ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကျော်သူ က ပြောသည်။ ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၏ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ မွန်ပြည်နယ်တွင် ကျိုက်မရောမှ လူနာတဦးသာ COVID-19 ရောဂါရှိပြီး ကျန်သူများမှာ အားလုံး negative ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန် ထားသည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ယနေ့ သေဆုံးသွားသော လူနာ ၂ ဦးတွင် ၁ ဦးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်ရောက်ပြီး အစိုးရက သီသန့် စောင့်ကြည့်နေရာတွင် Quarantine အသက် ၂၀ ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် နှလုံးရောဂါ အခံရှိခြင်းကြောင့် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ယနေ့တွင်သေဆုံး သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သံဖြူဇရပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဉာဏ်ဟိန်းက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ဦးရေသည် အနည်းဆုံး ၂ သောင်းဝန်းကျင် အထိ ရှိကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှ သိရသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး တွေ့ ရှိသူ ၂၇ ဦးအထိ ရှိလာပြီး သေဆုံးသူ ၃ ဦးအထိ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/ 10/220474.html
ကရင်ပြည်သူလူထုများ ဖြစ်စေချင်သော ဆန္ဒသဘောထားအရ ၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ကရင်ပါတီများအချင်းချင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေ မထပ်အောင် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်နယ် အခြေစိုက် ကရင် ၂ ပါတီမှ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြည်နယ်အခြေစိုက် ကရင်ပါတီများ၏ လာမည့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အခြေအနေ များနှင့်ပတ်သက်၍ မဲဆန္ဒရှင် ကရင်ပြည်သူလူထုများအကြား ရှုပ်ထွေးေ၀၀ါးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်အပေါ် ထိုကရင်နိုင်ငံရေးပါတီ ၂ ပါတီ၏ ပါတီခေါင်းဆောင်များအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ယခုလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ကရင်အမျိုးသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-KNDP ဥက္ကဋ္ဌ မန်းအောင်ပြည်စိုးက “ပြည်သူလူထု ဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်သည့် အတွက် သူ(PSDP)ရော ကျန်တဲ့ ကရင်ပါတီတွေနဲ့ပါ မဲဆန္ဒနယ်မြေတစ်ခုမှာ မထပ်အောင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ညှိနှိုင်းသွားပါမယ်” ဟု ယမန်နေ့ (ဧပြီ ၉ ရက်)တွင် ပြောသည်။
ထို့အတူ KNDP နှင့် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ -PSDP ပါတီ ၂ ခု စလုံးမှ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း အဓိကထား ယှဉ်ပြိုင် မည်ဟု အသီးသီး ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သည့်အတွက် မဲဆန္ဒနယ် အငြင်းပွားမှုကိစ္စများမှ အစပြုကာ ကရင်ပါတီများ အချင်းချင်း မသင့်မြတ်သည့် အခြေအနေများဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း မဲဆန္ဒရှင် ကရင်ပြည်သူလူထုအချို့၏ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
PSDP ဥက္ကဋ္ဌ စောခင်မောင်မြင့်က “မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုမှာ ကရင်ပါတီ ၂ ခုဝင်တာမျိုး လုံးဝ ရှောင်ရှားသွားမယ်လို့ သဘောတူ ထားတယ်။ မဲဆန္ဒနယ်လေး နည်းနည်းတော့ ခွဲရမှာပေါ့။ အဓိကက ကရင်ပါတီ အချင်းချင်း ပြန်ပြိုင် တာတော့ လုံးဝကို ရှောင်ရှားသွားမယ်” ဟုပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ကရင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်(KNDP) နှင့် ဖလုံ-စဝေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (PSDP)၊ ရန်ကုန် အခြေစိုက် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ(KPP) နှင့် ကရင်အမျိုးသားပါတီ (KNP)တို့ တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် ရပ်တည် လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%91%e1%80 %af%e1%80%86%e1%82%
ပလက်ဝမြို့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတဦးကို ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(အေအေ)အဖွဲ့က ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ အေအေနဲ့ တပ်မတော်တို့ကြား ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ပလက်ဝမြို့ ပတ်ပတ် လည်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပလက်ဝမြို့ ဧရိယာထဲရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအနီး တောင်ကုန်းပေါ်ကို လက်နက်ကြီးတလုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး အပိုင်းအစတွေဟာ ပလက်ဝမြို့ ရဲစခန်းနဲ့ ဈေးနားအထိ ကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ ချင်းပြည်နယ် စည်ပင် ဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ပြောပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် အသက် ၄၀ နဲ့ ၅၀ ကြားရှိ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတဦးကို အေအေအဖွဲ့က ညပိုင်းမှာ လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပြီး ဘာကြောင့် ဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာကိုတော့ မသိရှိရသေးဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
အစိုးရက အေအေအဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကြေညာထားတဲ့အတွက် အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အေအေ ဘက်ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ ဥပဒေကြောင်းအရ အခက်အခဲတွေ ရှိနေပါတယ်။ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ပလက်ဝမြို့မှာ ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းထိ စစ်ဘေးရှောင် အိမ်ထောင်စု ၈၄၀၊ လူဦးရေ ၃၆၅၇ ဦး၊ ဆမီး မှာ အိမ်ထောင်စု ၆၇၆၊ လူဦးရေ ၂၈၄၁ ဦး ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/381981
မွန်ပြည်နယ်မှာ သထုံမြို့အပါအဝင် မြို့နယ် ၁၀ ခုမှာ ရှိတဲ့ စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာတွေက စောင့်ကြည့်ရက် ၁၄ ရက်ပြည့်ပြီးသူ တွေအပြင် မပြည့်သေးသူ ပြည်တော်ပြန်အားလုံးကို ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့က နေအိမ်တွေကို ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရ ကြောင်း မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော် သထုံလွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းက ပြည်တော်ပြန်တွေအနက် ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့အထိ စောင့်ကြည့်လူနာထဲက သေဆုံး သူ ၁၀ ဦးအထိရှိ လာပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ‘ ‘ မနေ့က သောကြာနေ့က အကုန်လုံးကို ပြန်လွှတ်လိုက်တာ။ ဘာကြောင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာလည်း မသိရဘူး။ ဒီလူတွေကို နေအိမ်မှာပဲ ကွာရန်တင်းလုပ်မယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် စောင့်ကြည့် စင်တာမှာတောင် စည်ကမ်း လိုက်နာမှုရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ၆ ပေခွာဆို ကုတင်တွေ ကပ်ထားတယ်။ နေအိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း အိမ်မှာမနေဘူး။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လမ်းထွက်နေကြတယ်”လို့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့က အခြေအနေကို ပြောပြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကနေ ပြည်တော်ပြန်ဝင်လာသူတွေကို စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာမှာ ၁၄ ရက် စောင့်ကြည့်မှု ခံယူဖို့နဲ့ ငြင်းဆန်ပါက ဥပဒေအရအရေးယူဖို့ ထုတ်ပြန်ထားတာ တွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သထုံမြို့နယ်အတွင်း မှာတော့ စည်းကမ်းမလိုက်နာသူတွေကို အရေးယူတာမျိုးတော့ မတွေ့ရဘူးလို့လည်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့ ကပြောပြပါ တယ်။ https://www.bbc.com/burmese/burma-52255202
ရခိုင်ပြည်နယ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီကျော်ခန့်က လက်နက်ကြီး ကျည်ထံ ကျရောက်ပေါက်ကွဲ၍ အရပ်သား (၉) ဦးသေဆုံးပြီး ၆ ဦးကို အရေးပေါ်ဆေးရုံပို့ဆောင်ထားရကြောင်း ပုဏ္ဏားကျွန်း မြို့နယ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းတင်က ပြောသည်။ အဆိုပါ လက်နက်ကြီး ကျည်ကျရောက်ပေါက် ကွဲမှုကြောင့် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာသား ၄ ဦးမှာ ပွဲချင်းပြီး သေးဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပုဏ္ဏားကျွန်းဆေးရုံတွင် ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ၈ ဦးကို စစ်တွေဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ်လမ်းတွင် ၂ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာသို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့သည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းတင်က “ကျောက်ဆစ်ရွာမှာ ပွဲချင်းပြီး ဆုံးတာက ၄ ဦး၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းဆေးရုံမှာ ဆုံးတာ ၃ ဦး၊ နောက်ထပ် စစ်တွေကို အရေးပေါ် လူနာတင်လို့ လမ်းမှာ ဆုံးတာက ၂ ဦး ပေါင်း ၉ ဦး သေဆုံးတာ။” ဟု ပြောသည်။ သေဆုံးသူများမှာ ထက်မြတ်ဦး (၁၃) နှစ်၊ ဒေါ်သန်းသန်းစိုး (၂၅)နှစ်၊ ဦးလူလှချေ (၁၈)နှစ်၊ ဦးနီထွန်း (၂၆)နှစ်၊ ဦးမောင်မောင်ချေ (၂၂) နှစ်နှင့် အောင်ဆန်းနိုင် ၁၆ နှစ် တို့ အပါအဝင် ပေါင်း (၉) ဦး ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းတင်က အတည်ပြုပြောသည်။
လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ပေါက်ကွဲသည့် ကျောက်ဆိပ်ကျေးရွာသည် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ်နှင့် (၂) မိုင်ခန့်သာ ဝေးကွာပြီး ကျေးရွာအနီးတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။ မည်သည့်ဖက်က ပစ်ခတ်လိုက်သည့် လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံဆိုသည်ကိုတော့ အတိအကျ မသိရသေးပေ။ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့အဝင်တွင်တည်ရှိသည့် အမှတ် (၅၅၀) ခြေလျင်ခြေမြန် တပ်ရင်း ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုကြသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ကို မဇ္ဈိမက တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် ရခိုင့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ (AA) တို့ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ (၁) နှစ်ကျော် ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကာ အရပ်သားများသေဆုံးမှုလည်း မြင့်တက်လာနေသည်။ ယင်းအပြင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့် ရခိုင် မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် သိန်းချီသော ဒေသခံများမှာလည်း စစ်ဘေးရှောင် စခန်းများတွင် ခိုလှုံနေကြရသည်။ http://www.miz zimaburmese.com/article/68936
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း မူဆယ်ခရိုင် မူဆယ်မြို့တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်းရှိ MPT Mobile ဝန်ဆောင်မှုရုံးကို ဧပြီလ ၁၂ ရက် ည ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနစ်အချိန်ခန့်က လက်ပစ်ဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဖြင့် နှစ်ကြိမ် ပစ်ဖောက်ခံရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပစ်ဖောက်မှု ဖြစ်စဉ်ကြောင့် MPT Mobile ဝန်ဆောင်မှုရုံး၏ အတွင်းအပြင် ပျက်စီးခဲ့ကာ မြန်မာဆက်သွယ်ရေး ရုံးဝန်း အတွင်း MPT Mobile ဝန်ဆောင်မှုရုံးဘေးကပ်ရပ် ရပ်ထားသော Honda Fit အမျိုးအစားကား နောက်မှန်၊ Wish အမျိုးအစား ကားနောက်မှန်နှင့် KIA အမျိုးအစား ကားအလယ်မှန်တို့အပြင် အနီးအနားရှိ အိမ်တချို့မှ ပြုတင်းပေါက်မှန်တချို့ ကွဲခဲ့ကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဖြစ်စဉ် နှင့် ပတ်သတ်၍ မူဆယ်မြို့မရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ကနဦး စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်အရ လက်ပစ်ဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဖြင့် နှစ်ကြိမ်ပစ်ဖေါက်ခံရပြီး အမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်လျက်ရှိကြောင်းသာ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ https://news-eleven.com/article/169027
မော်ချီးဒေသ Facility Quarantine ထားရှိသည့် နေရာတွင် အသင့်ထားရှိရမည့် လက်ဆေးရေနှင့် စောင်၊ ခေါင်းအုံးများ ထားရှိ တာ မတွေ့ရကြောင်း ဖားဆောင်း မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းထွေးသူက ပြောသည်။
“သိန်းငါးရာထဲက ဒီ COVID 19 အတွက် မော်ချီးဒေသကို ( သိန်း ၁၅၀ ) လှူဒါန်းပါတယ်ပြောပြီးမှ အဲဒီ Facility Quarantine ( စောင့်ကြည့်လူနာ တွေထားတဲ့ နေရာ )ကို သွားစစ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဘာမှအဆင်သင့် မရှိတာတွေ့ရတယ်”လို့ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနကို ပြောသည်။ မော်ချီးဒေသ အကြီးစား သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ မတည်၍ မော်ချီး ဒေသ သဘာဝ ဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး ရံပုံငွေ သိန်း ၅၀ဝ အထဲမှ ငွေကျပ် သိန်း ၁၅၀ကို COVID 19 ရောဂါ တိုက်ဖျက် ရေးအတွက် အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း နန်းထွေးသူက ရှင်းပြသည်။
“ဒီငွေတွေကို သူတို့က ကော်မတီဖွဲ့ပြီးမှ ဒီသဘာဝဘေးအတွက် သိန်း ၁၅၀ လှူထားတယ်ဆိုရင် ကော်မတီကနေ လိုအပ်တဲ့ ပံ့ပိုးမှု ပစ္စည်း ကိရိယာတွေ ဖြည့်ပေးရမှာလေ သူတို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်”လို့ ဆိုသည်။ မော်ချီးဒေသ လိုခါးလိုတိုက်နယ်ဆေးရုံ အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ မော်ချီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များ စုစုပေါင်း ၁၉ ဦးပါသည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မော်ချီးကျေးရွာအုပ်စုမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ကင်းကတော့“ စောင့်ကြည့် လူနာ ၁၀ ယောက် ဆိုရင် တစ်ရက်ကို ခြောက်သောင်းလောက်ရှိတယ် အစိုးရက ဘာမှ မပေးဘူးလေ၊ ငါတို့ အဲဒီ ( သိန်း ၁၅၀ ) ထဲက သုံးထား တာ ဖြစ်တယ်”လို့ ဆိုသည်။ http://www.mizzimaburmese.com/article/68878
၁၁။ ဥရုချောင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် တရားဝင် ရွှေတူးဖော်နေမှုကို ဒေသခံတစ်ချို့သဘောမတူ
ဖားကန့် ဥရုချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်သည့်နေရာတွင် ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်နေသည်မှာ အစိုးရမှ တရားဝင်ခွင့်ပြု ထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
တာမခံ ဟောင်ပါးဖက် ဥရုချောင်းရှင်းလင်းရေးလုပ်နေသောအဖွဲ့များမှ ချောင်းရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျောက်စိမ်းနှင့် ရွှေတူးဖော်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင် နေကြသည်ဟု ဖားကန့် ဒေသခံတစ်ချို့ ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု များ ရှိခဲ့သည်။ ချောင်းရှင်းလင်းရာတွင်လိုအပ်သော စက်ယန္တရားများကို အစိုးရမှ မတတ်နိုင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းရှင်များကို ဖိတ်ခေါ်ကာ ရရှိလာသောသယံဇာတများကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဦးဒရှီလဆိုင်းက ပြောသည်။
‘‘ဥရုချောင်းရှင်းလင်းတဲ့အဖွဲ့က ဥရုချောင်းကို ပိတ်တန်းလုပ်ပြီး ကျောက်စိမ်းတူးဖော်တယ်။ နောက် ချောင်းရှင်းလင်းရေး ပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီး ဥရုချောင်းထဲကိုဘဲ ရွှေမျှောပြန်တိုက်ချတယ်။ အဲ့လိုလုပ်နေတာ့ ချောင်းရှင်းလင်းရေး ဘယ်လောက်ဘဲ လုပ်လုပ် ထိရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးရင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်လည်း ဥပဒေနဲ့ မညီညွတ် ဘူး။ အစိုးရကိုလည်း ဒါကို ခွင့်မပြုပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်တယ်’’ဟု ပြောသည်။
ဥရုချောင်းရှင်းလင်းရေးကို ယခင် အများပိုင် ကုမ္ပဏီများက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်မှစ၍ ပြည်ထောင်စု၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ပြည်နယ်အစိုးရ နှင့်အတူ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၊
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၃)ဦးနှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း (၂)ဦး အသီးသီးပါဝင်ကာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရပါသည်။ ဥရုချောင်း ရှင်းလင်းရေးအောက် ရွှေတူးဖော်ရန် ပြည်နယ်အစိုးရထံ ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုတင်ပြထားရာမှ ကုမ္ပဏီ ၈ ခု ကိုသာ ခွင့်ပြုထား ကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/09/%e1%80%a5%e1%80%9b%e1%80%af% e1%80%81%e1%
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကို ရပ်ဆိုင်းပြီး COVID -19 ကပ်ရောဂါကို မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ပူးပေါင်း တိုက်ဖျက်ရန် ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ (ALP) က ဧပြီလ ၁၂ ရက်တွင် ကြေညာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ကာ တိုက်တွန်း လိုက်သည်။ ALP ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တိုက်ပွဲများ ရပ်ဆိုင်းရန်၊ မောင်တောဒေသ နယ်စပ်ဂိတ် လူဝင်လူထွက်ကို တင်းကြပ် ရန်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန်ဟူသည့် အချက်သုံးချက်ကို အဓိက ဖော်ပြထားပြီး ယင်းအချက်များကို ပြည်သူများ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကို သိရှိစေလိုကြောင်း ALP ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စောမြ ရာဇာလင်း က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒေါ်စောမြ ရာဇာလင်း က “ပြည်သူတွေဆီကသတင်းတွေရပါတယ်။ အနောက်ဘက်ဂိတ်ဟာ ပွင့်နေတယ်ပေါ့။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုက တော်တော်ကို များနေပါပြီ။ ရောက်လာတဲ့သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေက Quarantine ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ သူတို့တွေကို ဘယ်လိုနေရာချမလဲဆိုတာ စဉ်းစားသင့်တာ ၁ ချက်ဖြစ်သလို ဂိတ်တွေကို အဝင်အထွက် အားလုံး ပိတ်ထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးအတွက် အစိုးရ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနက မြို့ပေါ်ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင် အသိ ပညာပေးမှုများရှိနေသော်လည်း၊ ကျေးလက်ဒေသရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းများအထိ အသိပညာပေးနိုင်မှုမရှိကြောင်း၊ ကျေးလက် ရှိ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကူညီမှုဖြင့် အသိပညာပေးမှုများ လုပ်ဆောင်နေရကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ ကွန်ဂရက် (REC) တွင်းရေးမှူး ကိုဇော်ဇော်ထွန်း က ပြောသည်။
ALP သည် ရခိုင်တွင် ဖိနှိပ်မှုမှ လွတ်ကင်းရေးနှင့် တန်းတူရေးအတွက် ၁၉၆၇ ခုနှစ်ကတည်းက လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ သောအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ စတင်ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး၊ ထိုနှစ်ဧပြီလတွင် နှစ်ဘက်အပစ်ရပ် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၁၃၂ ခုရှိနေပြီး စစ်ဘေးဒုက္ခသည် တသိန်းခြောက်သောင်းကျော်ရှိနေကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကွန်ဂရက် (REC) ထံမှ သိရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/13/220599.html
၁၃။ တောင်ကြီးမြို့ ညောင်ရွှေဟော်ကုန်း ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေသုံးခုနှင့် လမ်းသုံးခုတို့ကို ဆေးဖြန်းပြီး ၂၁ ရက် Lockdown ပြု လုပ်ထား
ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ညောင်ရွှေဟော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေသုံးခုနှင့် လမ်းသုံးခုတို့ကို ဆေးဖြန်းပြီး ၂၁ ရက် Lockdown ပြုလုပ်ထားကြောင်း ညောင်ရွှေဟော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ သိရသည်။
ညောင်ရွှေဟော်ကုန်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ (၅) (၆) (၇) တို့ရှိ ရှမ်းလမ်း၊ ဥသြလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းတို့ကို ယမန်နေ့ ညဘက် အချိန်တွင် လမ်းများ၊ ပိုးတွေ့လူနာနေအိမ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်တို့ကိုလည်း ဆေးဖြန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ အဆိုပါ လမ်း (၃) လမ်းကို (၂၁) ရက် Lockdown ပြုလုပ်ကာ ခေတ္တပိတ်ထားပြီး၊ အများပြည်သူ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် ညောင်ရွှေဟော် ကုန်းရပ်ကွက်၊ လမ်းထိပ်ရှိ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ အသံချဲ့စက်ဖြင့် လိုက်နာသိရှိနိုင်စေရန် ကြေညာပေးနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ လမ်း (၃) ခုထိပ်တွင် တာဝန်ရှိသူများ စောင့်ကြပ်နေပြီး၊ လမ်းသုံးခု အတွင်းရှိ နေအိမ်များမှ ပြင်ပ မထွက် ခွာစေဘဲ၊ လုံခြုံရေး တာဝန်ရှိသူများက PPE ဝတ်စုံများဖြင့် စားသောက်စရာများကို ဝယ်ခြမ်းပြီး သွားရောက် ပေးပို့နေကြောင်း သိရသည်။
၎င်း၏ မိသားစုဝင်ဖြစ်သော လာကြိုခဲ့သည့် မိခင်နှင့် အမဖြစ်သူတို့သည် ဆေးရုံတွင် မနေဘဲ နေအိမ်ကို ပြန်လာသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ညောင်ရွှေဟော်ကုန်းရပ်ကွက် နေအိမ်ကို လာရောက် ခေါ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး စဝ်စံထွန်း ဆေးရုံ ရှိ သီးသန့်ဆောင်တွင် ထားရှိစောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပိုးတွေ့လူနာ (Case-029) လမ်းကြုံလိုက်စီးခဲ့သော ကလောမြို့ နေထိုင်သူကိုလည်း Quarantine ဆောင်ရွက်ထားပြီး၊ လမ်းခရီးတွင် ကလောမြို့၊ နှစ်ထပ်လမ်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် တောင်လေးလုံးတို့ရှိ စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တို့ တွင် လည်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခဲ့ကြသဖြင့် အဆိုပါ ဂိတ်များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုလည်း Quarantine ခံယူရန်ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း မြို့ခံများက ဝေဖန်နေကြသည်။ https://news-eleven.com/article/168935
၁၄။ ဖားကန့် မြို့ အဝင်အထွက်ကို စတင်စစ်ဆေးတော့မည်ဟု ပြည်နယ်အစိုးရပြော
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့သို့ လူသစ်များထပ်မံဝင်ရောက်မှု မရှိစေရန် ဧပြီလ ၁၁ရက်နေ့မှစကာ လူအဝင်အထွက် စိစစ်တော့ မည်ဟု သိရသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် Covid-19 ကူးစက်ရောဂါစိုးရိမ်သည့်အတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော်ပြောသည်။
“ဒေသခံတွေစိုးရိမ်တာကတော့ တစ်ဖက်မှာပြန်လာတဲ့သူတွေ ထိုင်းကပြန်လာတဲ့သူရှိတယ်။ တရုတ်ကပြန်လာတဲ့သူတွေ ရှိတယ်။ အလုပ်မရှိအကိုင်မရှိတဲ့သူတွေက ဖားကန့်ဒေသမှာ ရေမဆေးအဖြစ်ဝင်လာနိုင်တယ်။ ထိန်းချုပ်ဖို့ ပိုခက်သွားမယ်ဆို ပြီး ဒေသခံတွေတင်ပြတဲ့တွက် ကျနော်တို့က ၁၁ ရက်နေ့ပြီးတော့ စီစစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုစီစစ်တဲ့နေရာမှာ ဒေသခံ မှတ်ပုံတင်ကိုင်ဆောင်တာ ဟုတ်မဟုတ်၊ ကျောက်မျက်ကုမ္မဏီမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူ၊ ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ က ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာပါမပါ၊ မပါဘူး မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အဝင်မခံပါဘူး။ ပြန်လွှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော် ပြောသည်။
ယခုအစီစဉ်သည် ဖားကန့်မြို့သို့ ဝင်လာမည့်သူများကိုသာ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး ဖားကန့်မြို့မှ ထွက်လာသူများအား စစ်ဆေး မည် မဟုတ်ဘဲကြောင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဇော် ပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ထိ စာရင်းများအရ Home Quarantine ထားရှိသူ ဦးရေ ၁၄၆၀ ကျော်ရှိပြီး၊ Facility Quarantine ဦးရေ ၈၄၀ ရှိကာ စုစုပေါင်း ပြည်ပမှပြန်လည် ရောက်ရှိလာသည့် လူဦးရေ ၃၀၃၆ ဦးရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/20 20/04/10/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%
၁၅။ ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ညောင်သာယာကျေးရွာတွင် ပဋ္ဌာန်းသိမ်းပွဲ၌ ခေါက်ဆွဲကြော် နှင့် ရေခဲမုန့် ကျွေးမွေးရာမှ ရဟန်း၊ သာမဏေနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသား ၄၀ ကျော် အစာ အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား
ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ဆင်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်သာယာကျေးရွာတွင် ဧပြီလ ၁၂ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ပဋ္ဌာန်း သိမ်းပွဲ၌ ခေါက်ဆွဲကြော်နှင့် ရေခဲမုန့် ကျွေးမွေးရာမှ ရဟန်း၊ သာမဏေနှင့် ရွာသူ၊ ရွာသား ၄၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ညောင်သာယာရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဓမ္မာရုံမှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပဋ္ဌာန်းသိမ်းပွဲမှာ မနက်ပိုင်းမှာ ဘုန်းကြီးတွေကို ခေါက်ဆွဲကြော် ကပ် တယ်။ နောက်လူတွေစားကြတယ်ပေါ့။ နောက်နေ့ ဆွမ်းကပ်ပြီး ရေခဲမုန့် ကျွေးတယ်လို့သိရတယ်။ အများစုကတော့ ညောင်သာယာရွာကဘဲ။ တခြားရွာတွေကတော့ မလာကြဘူးပေါ့” ဟု ညောင်သာယာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသာကျော်က ပြောကြားသည်။ “သူတို့က အန်ကြတယ်။ ဝမ်းသွားတယ်။ ဒီလောက်ပါဘဲ။ အခြေအနေကတော့ မစိုးရိမ်ရပါဘူး။ သူတို့ကို တောင်စွန်း တိုက်နယ်ဆေးရုံကတဆင့် ဇုတ်သုတ်တိုက်နယ်ဆေးရုံနဲ့ ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးထား ကြပါတယ်” ဟု ဦးသာကျော်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဆင်အင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်သာယာကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် ပဋ္ဌာန်းသိမ်းပွဲ၌ ခေါက်ဆွဲကြော် ကျွေးမွေးကြောင်း၊ တချို့လည်း ပါဆယ်ယူသွားတာ မျိုးလည်းရှိကြောင်း၊ တချို့ကလည်း ဆွမ်းဆက်ကပ် ကျန်နေခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းအခြေအနေမှ အစာအဆိပ်သင့်သလို ဖြစ်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဘီးလင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ အမှတ် (၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦးက ပြောကြားသည်။ ၎င်းက ဆက်လက်ပြီး “လောလောဆယ် ရဟန်း (၂) ပါး၊ ကိုရင် (၄) ပါး၊ အမျိုးသား (၂၅) ဦနဲ့ အမျိုးသမီး (၁၂) ဦးကို ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို တင်ပို့ပေးထား ကြပါတယ်။ နောက် ဇုတ်သုတ်တိုက်နယ်ဆေးရုံမှာ တစ်ဦးလို့တော့ ပြောကြတယ်။ အားလုံး (၄၄) ဦးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့” ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ညောင်သာယာကျေးရွာ၌ အစာအဆိပ်သင့်မှု ခံစားခဲ့ကြရသည့် လူနာများအား ဘီးလင်းမြို့နယ် မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များမှ လူနာယာဉ်များဖြင့် ဘီးလင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးနှင့် ဇုတ်သုတ်တိုက်နယ် ဆေးရုံများသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/articl e/168962
COVID-19 အတည်ပြု လူနာ အမှတ် (၂၉ ) သည် တောင်ကြီးသားတဦးဖြစ်ပြီး စဝ်စံထွန် ဆေးရုံသို့ လွဲပြောင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ည ၈ နာရီ ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက် အရသိရသည်။
ထိုသူသည် အသက် (၂၆ ) အရွယ် အမျိုးသား ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ရောက်ရှိလာပြီး ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တစ်ဆင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော facility Quarantine ပြုလုပ်ရာမှ ဓာတ်ခွဲ နမူနာ ပေးပို့ စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။ လက်ရှိအဆိုပါ လူနာ ကို သျှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး လွှဲပြောင်းကုသရန် စီစဉ်လျက်ရှိပြီး လတ်တလော ကျန်းမာရေး အခြေအနေမှာ ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါလူနာသည် အစိုးရကြေငြာချက်ထုတ်ပြီးမကြာခင် ယနေ့ ညပိုင်းတွင် တောင်ကြီး စဝ်စံထွန်းဆေးရုံသို့ ရောက်နေပြီဖြစ် ကြောင်း ၊ ၄င်းအားသွားကြိုခဲ့သူများအားလည်း Quarantine လုပ်ရန် ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း သျှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒေါက်တာ နှင်းအိဖြူက မီဒီယာများသို့ ဖြေကြားသည်။ https://burmese.shanne ws.org/archives/16119
COVID-19 ကြောင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ထိခိုက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် သျှမ်းပြည်အတွင်း ရှိမြို့နယ် ၂၀ ကျော် ကို ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းများထောက်ပံ့လှူဒါန်းသွားမည် ဟု RCSS/SSA က ပြောသည်။
ထို သျှမ်းပြည် အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၂၀ ကို COVID-19 တားဆီးကာကွယ်ရေး လှူဒါန်းရန်အတွက် သျှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးကောင်စီ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ (PMC) အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်သွားမည်ဟု PMC မှ ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်ကြီး စိုင်းခမ်းဆေး က သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။
“ ဒီရောဂါ ဖြစ်လာရင် တမျိုးသားလုံး ထိခိုက်နိုင်တယ်။ ဒါတွေက အမျိုးသားလုံခြုံရေး အောက်မှာရှိတော့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး ကိုလည်း ထိခိုက်လာနိုင်တယ်” ဟု ဗိုလ်ကြီး စိုင်းခမ်းဆေး က ဆို သည်။ RCSS/SSA အနေဖြင့် လူထုနှင့်လက်တွဲပြီး အတတ် နိုင်ဆုံး ကူညီသွားမည် ဟု လည်း ဆိုပါသည်။ https://burmese.shannews.org/archives/16071
ကမ္ဘာမှာ COVID-19 ကပ်ဘေးရောဂါကြီး ရင်ဆိုင်နေချိန်ကာလ မျှော်လင့်ချက်ထားကြဖို့နဲ့ သွေးစည်းညီညွတ်ကြဖို့ ကက်သလစ်အသင်းတော်ရဲ့ ရန်ကုန်သာသနာပိုင် ကာဒီနယ်လ် Charles Bo က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ ရန်ကုန် စိန့်မေရီ ကက်သလက် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှစ်ခိုးကျောင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ အီစတာပွဲတော်အတွက် ဗွီဒီယိုမိန့်ခွန်း တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်မှာ ကမ္ဘာမှာ လူပေါင်း သန်းနဲ့ချီ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံနေရပြီး အဲဒီထဲမှာ အီတလီနိုင်ငံက ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး အနည်းဆုံး အပါး ၆၀ ကျော် အဲဒီရောဂါကြောင့် ပျံလွန်တော်မူခဲ့ကြောင်း ကာဒီနယ်လ် Charles Bo က အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ဝေဒနာ အပြင်းအထန် ခံစားနေရတဲ့ လူထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်လည်း အစဉ်မပြတ် ဆုတောင်းပေးနေကြောင်းလည်း ကာဒီနယ်လ် Bo က ပြောပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် လူအချင်းချင်း အနီးကပ် ထိတွေ့မှုမလုပ်ဖို့၊ ဘာသာရေးနဲ့ အခြား လူမှုရေးဆိုင်ရာ လူစုလူဝေးနဲ့ ပြုလုပ်မှုတွေ တားမြစ်ထားတာကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတွေ ပိတ်ထားရတဲ့ အခြေအနေ အတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ ကာဒီနယ်လ် Charles Bo က မိန့်ခွန်းမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ မမြင်နိုင် တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူသားတွေကို သင်ခန်းစာပေးခဲ့တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။ လက်နက်၊ စစ်အင်အားတွေ ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားကြီး နိုင်ငံတွေမှာတောင် COVID-19 ရောဂါကပ်ဘေးကို ဒူးထောက် အရှုံးပေးခဲ့ရတယ်လို့ ကာဒီနယ်လ် Charles Bo က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ကမ္ဘာ့ကပ်ဘေးရောဂါကြီးကို လူသားချင်းစာနာမှု၊ ကူညီရိုင်းပင်းမှုတွေနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်း မှာ တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/covid19-charles-bo/5369417.html
၁၉။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ဦး၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားချက်သည်​ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်း ကွဲစေ သည်ဟု ဆိုကာ အရေးယူပေးရန် လင်းခေးမြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဝန်ကြီးချုပ်ထံတိုင်ကြား
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားချက် သည် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစေသည်ဟုဆိုကာ အရေးယူပေးရန် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပါတီဝင် လင်းခေးမြို့နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သုံးဦးက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ဧပြီ ၁၂ ရက်တွင် စာပေးပို့ တိုင်ကြားထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်သည် ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး လုပ်ငန်းကိစ္စဖြင့် ခရိုင်၊ မြို့နယ် ကော်မတီဝင်များဖြင့် တွေ့ဆုံရန် လင်းခေးမြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်ညအိပ်ခဲ့ကာ၊ ဧပြီ ၁၁ ရက်တွင် ရှမ်းလူမျိုးနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အချင်းချင်း ကြား မုန်းတီးခြင်းနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် စာသားများ ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးတင်ခဲ့ခြင်းကို တွေ့ရှိရကြောင်း တိုင်ကြားစာတွင် ရေးသားထားသည်။
ထိုသို့ ရေးသားခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၃၆၄) အရလည်းကောင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ဥပဒေ အမှတ် (၈) ဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ (၂၄) ပါ မည်သူမျှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အချင်းချင်းမုန်းတီးခြင်း၊ ရန်မူခြင်း စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်း တစ်မျိုးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်သော၊ သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်လာရန် အကြောင်းရှိသော အပြုအမူများကို မပြုလုပ်ရ အချက်အရလည်းကောင်း ဥပဒေဖြင့် ငြိစွန်းနိုင် သည့် အရေးအသားဖြစ်နေသောကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူလူထုနှင့် လင်းခေးပြည်သူလူထုများကလည်း အဆိုပါဝန်ကြီး၏ ရေးသားမှုကို သဘောမတူသဖြင့် ထိုက်သင့်သည့်အတိုင်း အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဝန်ကြီးချုပ်က အမြန်ဆုံး စီစဉ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ဟု တိုင်ကြားစာတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
ယင်းသို့ ရေးသားမှုကို ဧပြီ ၁၁ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ပြန်လည်ဖျက်ခဲ့ပြီးတောင်းပန်စာ ပြန်လည်ရေးသားခဲ့သော်လည်း တိတိကျကျသေချာစွာ တောင်းပန်ထားခြင်း မဟုတ်ဟုဆိုကာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူများက ဝေဖန်မှုများရှိနေသည်။ https://news-eleven.com/article/169004
၂၀။ တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် ND-Burma တောင်းဆို
Covid-19 ကပ်ရောဂါ ရင်ဆိုင်နေရချိန်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်အနေဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို လိုက်နာ၍ တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်စဲရန် လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကွန်ယက်(ND-Burma)က ယနေ့ (ဧပြီ ၁၀ရက်) ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်၍ တောင်းဆိုလိုက် သည်။
တပ်မတော်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနှင့် တည်ရှိနေမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူ အသုံးချ၍ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေသော တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် ပြည်သူလူထုအတွက် အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းထက် စစ်တပ်၏ လိုလားချက်ကို ရှေ့တန်းတင် ဆောင်ရွက်နေမှုအပေါ် ရှုတ်ချကြောင်း ND-Burma ကွန်ယက်က ဆိုသည်။
ကွန်ယက်၏ ပြောခွင့်ရ ဒေါ်သက်သက်အောင်က “ဒီအချိန်သည် ကပ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အားလုံးပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်။ အစိုးရ၊ တပ် ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ စသဖြင့် ဒါတွေသည် လက်ရှိမှာ Covid-19 ဖြစ်နေတဲ့ ကာလမှာတောင် ရပ်တန့်မှု မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ဆိုရင် ကျမတို့ ဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲပေါ့။ အခုလက်ရှိ ကာလသည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားရမယ့် ကာလဖြစ်တာ တောင် မရပ်စဲနိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါကအင်မတန်မှ ပြည်သူ လူထုအတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ရော ဆုံးရှုံး နစ်နာမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့အတွင် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ အကြား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြင်း ထန်လျက်ရှိပြီး တပ်မတော်၏ လေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးများပါ အသုံးပြုမှုကြောင့် အရပ်သား ပြည်သူများထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိ နေသလို စစ်ပြေးရှောင်နေရသူ သိန်းချီရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများက ဆိုသည်။ အလားတူ အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့ချုပ်(မြန်မာနိုင်ငံ)-WLB ကလည်း ရခိုင်၊ ချင်း၊ ကရင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသများတွင် တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်ဆင် နေမှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် တပ်စခန်းများရုပ်သိမ်းရန်၊ NCA ပါ အချက်များကို လိုက်နာရန်အပြင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ၍ Covid-19 ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကို အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ရန်စသည့် အချက် (၉)ချက်ပါ တောင်းဆိုချက်ဖြင့် ယမန် နေ့က ထုတ်ပြန်ချက် တစ်စောင်ထုတ်ပြန် ထားသေးသည်။
ND-Burmaကို တိုင်းရင်းသားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့် လိင်စိတ်ကွဲပြားသူများကို ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်း ၁၂ ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး နစ်နာသူများ၏ တရားမျှတမှုရရှိရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှစ၍ မှတ်တမ်း တင်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%90%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84 %e1%80%b9%e1%80
မ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID19 ပိုး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ် ကပ်တဲလ်ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အားနည်းသောကြောင့် စိုးရိမ်နေရကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ကပ်တဲလ် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဒိုခန်တွာန်က “သူနဲ့ ဆက်စပ်သူတွေ အကုန်လုံး မစစ်ဆေးနိုင်သေးဘူး၊ ကျန်သေးတယ်၊ အခု ၃၅ ယောက်က အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ လေ့လာပြီး သူတို့ဖော်ပြတဲ့သူတွေပဲပါတယ်၊ ကိုယ့်ဟာကို မပြောထွက်ချင်တဲ့သူက အများကြီး ကျန်သေးတယ်၊ အိမ်ရှင်ဖက်ကလည်း သေသေချာချာ မပြောဘူး၊ ပွဲလုပ်ပါတယ် ဆိုမှ ၃၅ ယောက်နဲ့ ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ၊ ပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတာဆိုတော့ ဆွေမျိုး၊ သူငယ်ချင်း၊ အများကြီးရှိမှာပဲ၊ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခုစိုးရိမ်နေရတာ၊ ပြီးတော့ သာမန်လူဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ကနေ ရောဂါက တွေ့နေတယ်ဆိုတော့ အရမ်းစိုးရိမ်ရတာပေါ့၊ ပြီးတော့ အစိုးရကလည်း သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ အဖျားမရှိ၊ အသက်ရှူကျပ်တာ မရှိဘူးလို့ ဖော်ပြတော့ ပြည်သူအချို့က ရောဂါမရှိဘူးလို့ပဲ ယုံကြည်ကြတယ်” ဟု ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကပ်တဲလားကျေးရွာရှိ Lock down ချခံရသူ အားလုံး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးဖို့ မလိုကြောင်း ချင်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီး ပေါင်လွန်မင်ထန်က ပြောသည်။ ဝန်ကြီး ပေါင်လွန်မင်ထန်က “ရွာထဲက လူတွေ တော့ အကုန်လုံးစစ်ဖို့ မလိုပါဘူး၊ သူတို့လည်း အခုထိ ကျန်းကျန်းမာမာပဲ နေတယ်၊ ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ သက်မှတ်ချက်မှာ
လည်း ၂၁ ရက်လုံး စောင့်ကြည့်ရမယ်၊ ရွာထဲက လူတွေလည်း ပိုးဘာမှမတွေ့ရင်တော့ တစ်ရွာလုံးကို ဖြေလျှော့ပေးလိုက် မယ်” ဟု ပြောသည်။
ဦး ဒိုခန်တွာန်က “အခုပထမဆုံးတွေ့ရှိသည့် လူနာနဲ့ ဆက်စပ်သူ ၁၃ ဦးကို စစ်ဆေးတယ်၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၃ ဦးပါတယ်၊ အဲ့ထဲမှ လူနာမိခင်ကပါနေတယ်၊ သူဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာ ဘာမှမပေါ်ဘူး၊ သူနဲ့ ဆက်သွယ်တဲ့ စောင့်ကြည့်တဲ့ဟာက ၃၅ ယောက်ပဲဖြစ်နေတယ်၊ တကယ်တော့ အကုန်လုံးကို စစ်ဆေးသင့်တယ်၊ အစိုးရဖက်က ၇ ရက်စောင့်ကြည့်ဖို့ သက်တမ်းတိုး တော့ ကျွန်တော်တို့က စောင့်ကြည့်အဖြစ် နေဖို့လိုတယ်၊ နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့သူကိုလည်း တီးတိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကနေ လူနာ တင်ကားနဲ့ လာခေါ်နေပြီ” ဟု ပြောသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-72183
ယခုရက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လက်နက်၊ခဲယမ်းများ ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးရမိကာ တရားခံ တယောက် မျှ မမိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် လွယ်ခမ်းကျေးရွာတွင် ဧပြီ ၉ ရက် မနက်ပိုင်းက ဦးခေါ်ကျားဝမ် နေအိမ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် လက်နက်ပစ္စည်းများ တန်ဖိုးငွေကျပ် ၂.၇ ဘီလီယံကျော် (ကျပ်သန်းပေါင်း ၂၇၀ဝ ကျော်) သိမ်းဆည်းရ မိကြောင်း မူးယစ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။ ထိုမူးယစ်ဆေးဝါး နှင့် လက်နက်များကို နေအိမ်တွင် သိမ်းဆည်းရမိသော်လည်း တရားခံမှာ လွှတ်မြောက်နေဆဲဟု သိရသည်။ သိမ်းဆည်းရမိသည့် လက်နက်ပစ္စည်းများမှာ ကျည်အိမ် ၈ ခု၊ M22 ကျည် ၁၂၃ တောင့်၊ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းစိမ်း တို့ ဖြစ်သည်။ “ အခုရက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မှာ မူးယစ်ဆေးတွေ ဆက်တိုက် ဖမ်းဆီးရမိတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားခံ မမိဘူး။ ထူးဆန်းတယ်။ မူးယစ်ဆေး၊ လက်နက်တွေက အိမ်ထဲကနေ သိမ်းရမိပေမယ့် တရားခံကတော့ ပျောက်နေတယ်” ဟု ကွတ်ခိုင်မြို့ အမည်မဖော်လိုသည့် ဒေသခံ တဦး က ပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရသည့် ကိစ္စတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိကြောင်း၊ တရားခံလွှတ်မြောက်နေသည့်အပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ များနေကြောင်း ကွတ်ခိုင်မြို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ပြောသည်။ “ လွယ်ခမ်း၊ ကောင်းခါး ဘက်မှာ အိမ်တိုင်းလိုလို မူးယစ်ဆေးရှိတယ်။ မူးယစ်ဆေးမိပြီး တရားခံ လူမမိတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး”ဟု ကွတ်ခိုင်မြို့ နေထိုင်သည့် မဘောက် က ပြောသည်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှ ဧပြီ ၉ ရက်ထိ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်စပ်သည့် ပစ္စည်း တန်ဖိုးငွေ ၄၁၄ ဘီလီယံကျော် သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း မူးယစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ https://burmese.shannews.org/archive s/16090
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် မြန်မာ့ ပင်လယ်ပိုင်နက်အတွင်း တရားမဝင် ရောက်ရှိလာသည့် ငါးဖမ်း စက်လှေ ၆ စီး ကို မြန်မာ့ တပ်မတော်(ရေ)မှ သတိပေး ခြောက်လှန့် ပစ်ခတ်ခဲ့ရသဖြင့် စက်လှေတစီး အနည်းငယ် ထိခိုက် ပျက်စီးပြီး ရေလုပ်သား ၆ ဦးခန့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရရှိသွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီခွဲတွင် မြန်မာပိုင်နက် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မျဉ်း၏ ၃ မိုင်မှ ၆ မိုင်ကွာအတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ငါးဖမ်း စစ်လှေ ၆ စီးကို မြန်မာဘက်က မီးအချက်ပြခြင်း၊ အသံချဲ့စက်ဖြင့် အသံပေး ခေါ်ဆိုခြင်း၊ ဆက်သွယ် ရေးစက်မှ ရပ်တန့်ရန် ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ရပ်တန့်ခြင်း မရှိ၍ ယခုလို သတိပေးပစ်ခတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
သို့သော် တပ်မတော်(ရေ)က ယင်းဖြစ်စဉ်ကို ထို့နေ့ည ၁၁ နာရီခွဲ တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ် စစ်ရေယာဉ် BNS-Somu dra Avijan(F-29)မှ စစ်ရေယာဉ် မှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အယ်လ်ဆာထံသို့ ဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ရာ ၎င်းမှ အဆိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ငါးဖမ်းရေယာဉ်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းထိန်းသိမ်းသွားမည်ဟု အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်မှ သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသည် မြန်မာနှင့် ကမ်းရိုးတန်း ထိစပ်သည့်နေသည့် နိုင်ငံတခုဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ပြဿနာများကြောင့် ထွက်ပြေးသွားရသည့် ဒုက္ခသည်များအရေးဖြေရှင်းရန် မြန်မာအစိုးရသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့်ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရန်ကြိုးစားနေရသည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/04/12/2 20535.html
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နယ်လှည့်ပြီး လူထုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို စဉ်ဆက်ပြုလုပ်လာခဲ့သည့် ကချင်နယ်လည့် ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့ KBPHWT သည် ယခုချိန် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပြန်လည် လုပ်ဆောင်နေပြီဟု သိရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ အစိုးရကျန်းမာရေးဌာန ရောက်ရှိမှုနည်းပါးသော ကျေးလက်ဒေသများသို့ Kachin Back Pack Health Worker Team အဖြစ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုချိန် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်းကာ လူနေမှု ထူထပ်သော မြစ်ကြီးနားမြို့အနီးတစ်ဝိုက် စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် ရောဂါကြိုတင် ကာကွယ်တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရပါသည်။
“ကျနော်တို့က ကိုဗစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဓိက လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာတွေရှိတယ်။ အဲ့ထဲမှာ စစ်ရှောင်တွေနဲ့ ပြည်တော်ပြန်တဲ့ သူတွေကို ဦးတည်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ ပိုးသတ်ဆေးသွားဖျန်းပေးတာ တွေကို လုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ ပြည်တော်ပြန်တဲ့ သူတွေကို ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြင်ဖွင့်ပေးတာတွေ လုပ်ပေးတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ဆေးကုသမှုတွေကို သွားရောက်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်” ဟု KBPHWT တာဝန်ခံ Mr.Zet ပြောဆိုသည်။
အစိုးရ၏ Covid-19 ကာကွယ်တားဆီးလုပ်ဆောင်ချက်များ အားနည်းနေသေးသည့်အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အားဖြည့်ရန် ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအဖြစ် လုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု Kachin State Covid-19 Prevention Network မှ ကိုပေါလု ယခုလိုပြောဆိုသည်။ “အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉က ကမ္ဘာမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့တာလည်း အချိန်တစ်ခုကြာလာပြီဖြစ် တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ဒေသက ဆင်းရဲတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေ အများအပြား ပြုလုပ်ရမယ်ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ ဖြစ်လာရင်လည်း အစိုးရကထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကြိုသိနေတယ်။ ကိုယ့် လူမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ ကျနော်တို့မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပူးပေါင်း ပြီးနိုးဆော် လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
Kachin State Covid-19 prevention Network တွင် ကချင်နယ်လှည့်ကျောပိုးအိတ်ကျန်းမာရေးလုပ်သားအဖွဲ့ (KBPHWT)၊ Kachin National Youth Network ၊ All Kachin Youth Union (AKYU)၊ KSPP ၊ Kachin Democratic Woman league ၊ Ram Hkye ၊ Kachin Democratic Institute(KDI) ၊ IDP ၊ Mung Chying Rawt Jat ၊ Kachin Development Networking Group(KDNG) နှင့် WHG စသောအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။https://burmese.kachinnews.com/2020/04/13/covi19%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%8
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူမြို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတပ်စခန်းတည်ရှိရာ ဂျပန်ရေတွင်းနှင့် ကြံတောရွာ ရာဘာတောထဲတွင် ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ကတည်းက သောင်တင်နေသည့် နေရပ်ပြန် မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၃၇ ဦးကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက သွားရောက်ခေါ်ယူခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မန္တလေး၊ ပဲခူး၊ နေပြည်တော်၊ ဧရာဝတီ၊ တနင်္သာရီ၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ မြန်မာ နိုင်ငံသား ၁၃၇ ဦးကို ဧပြီ ၁၁ ရက်နေ့က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လူမှုအဖွဲ့များမှ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူထံ သွားရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးနောက် ယမန်နေ့ ဧပြီ ၁၂ ရက်တွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့သို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာပြီး ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်ဟု ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စောရှား ဖောင်အွာက ပြောသည်။ “မွန်ပြည်သစ်ပါတီစခန်းဘက်က ပြန်လာရင် သူတို့တွေကို နေရာစီစဉ်ပေးထားကြဖို့ မနေ့က စခန်းတာဝန်ရှိသူနဲ့ သွားရောက် ညှိနှိုင်းမှု လုပ်ခဲ့တယ်။ ရွာတွေမှာ ပေးမဝင်ကြတော့ ရာဘာပင်အောက်မှာ ၂ ည အိပ်ခဲ့ရတယ် ပြောတယ်။ သူတို့အခု ဘုရားသုံးဆူ နယ်စပ်ဂိတ်မှာ ရောက်လာပါပြီး” ဟု ယနေ့ (ဧပြီ ၁၂ ) ရက်တွင် ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူများထဲမှ မွန်ပြည်နယ်အတွင်း နေထိုင်သူများကို ၎င်းတို့၏ပြည်နယ်အစိုးရထံ လွှဲပြောင်းပို့ဆောင် ပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည်နယ်နှင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှ နေထိုင်သူများအား ဘုရားသုံးဆူမြို့စာသင်ကျောင်းနှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့စာသင်ကျောင်းများတွင် နေရာသတ်မှတ်ထားပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ကြည့်မှု ပြုလုပ်သွားမည်ဟု တာဝန်ရှိသူများထံမှ သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဘုရားသုံးဆူဂိတ်တွင် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ပြည်ပမှ ပြန်လာသူများကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး ယနေ့အချိန်ထိ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများ နေ့စဉ် ဝင်ရောက်လာ သေးသည်ဟု နယ်စပ်ဂိတ်တွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ပူးပေါင်းအဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%91%e1%80 %af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80
(No. 16, April 10, 2020)
၁။ RCSS/SSA ကိုဗဈ တိုကျဖကျြရေး ဆေးတပျအား အစိုးရတပျ လိုကျလံတိုကျခိုကျ
၂။ လူမြိုးနှငျ့ ဒသေစှဲမထားဘဲ ကနျြးမာရေး အသိပေးညှနျကွားခကျြမြားကို လိုကျနာကွရနျ KNU တိုကျတှနျး
၃။ ခငျြးပွညျနယျဆမီးမွို့က စဈဘေးရှောငျ သုံးထောငျ ရအေခကျအခဲဖွဈနေ
၄။ မှနျပွညျနယျတှငျ ဆေးရုံ Quarantine ဝငျ ထိုငျးပွနျ ၃ ဦး သဆေုံး
၅။ လူထုဆန်ဒအတိုငျး မဲဆန်ဒနယျမ ထပျအောငျ ကွိုးပမျးမညျဟု ပွညျနယျအခွစေိုကျ ကရငျ ၂ ပါတီပွော
၆။ ပလကျဝမွို့ စညျပငျဝနျထမျးတဦးကို အအေအေဖှဲ့ ဖမျးဆီးချေါဆောငျ
၇။ မှနျ မှာ စောငျ့ကွညျ့ရေးစငျတာတှကေ စောငျ့ကွညျ့ရကျ ၁၄ ရကျ မပွညျ့သေးသူတှေ အပါအဝငျ အားလုံးကို ပွနျလှတျ
၈။ ပုဏ်ဏားကြှနျးတှငျ လကျနကျကွီးကညျြထိ၍ မိနျးကလေးအပါအဝငျ ၉ ဦး သဆေုံး၊ ၆ ဦး ဆေးကုသမှု ခံယူနေ
၉။ မူဆယျမွို့ရှိ MPT ရုံးအား လကျပဈဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဖွငျ့ ပဈဖောကျခံရ
၁၀။ မျောခြီး Quarantine စငျတာတှငျ လကျဆေးရညျ၊ စောငျ၊ ခေါငျးအုံးမြားမရှိ
၁၁။ ဥရုခြောငျးရှငျးလငျးရေးခေါငျးစဉျဖွငျ့ တရားဝငျ ရှတေူးဖျောနမှေုကို ဒသေခံတဈခြို့သဘောမတူ
၁၂။ တိုကျပှဲမြားရပျပွီး COVID-19 အရေး ပူးပေါငျးရနျ ALP တိုကျတှနျး
၁၃။ တောငျကွီးမွို့ ညောငျရှဟေျောကုနျး ရပျကှကျ၊ နယျမွသေုံးခုနှငျ့ လမျးသုံးခုတို့ကို ဆေးဖွနျးပွီး ၂၁ ရကျ Lockdown ပွုလုပျ ထား
၁၄။ ဖားကနျ့မွို့ အဝငျအထှကျကို စတငျစဈဆေးတော့မညျဟု ပွညျနယျအစိုးရပွော
၁၅။ ဘီးလငျးမွို့နယျ၊ ညောငျသာယာကြေးရှာတှငျ ပဋ်ဌာနျးသိမျးပှဲ၌ ခေါကျဆှဲကွျောနှငျ့ ရခေဲမုနျ့ ကြှေးမှေးရာမှ ရဟနျး၊ သာမဏနှေငျ့ ရှာသူ၊ ရှာသား ၄၀ ကြျော အစာ အဆိပျသငျ့မှုဖွဈပှား
၁၆။ သြှမျးပွညျတှငျ ဒုတိယမွောကျ ကိုဗဈ လူနာ တောငျကွီးသားဖွဈ
၁၇။ COVID-19 ကွောငျ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေး ထိခိုကျမညျကို RCSS စိုးရိမျ
၁၈။ ကပျရောဂါဘေး ကာလကွီးမှာ စညျးလုံးညီညှတျကွဖို့ ကကျသလဈ ရဟနျးမငျးအမတျ တိုကျတှနျး
၁၉။ ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ဝနျကွီးတဈဦး၏ လူမှုကှနျရကျတှငျ ရေးသားခကျြသညျ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး စိတျဝမျး ကှဲစေ သညျဟု ဆိုကာ အရေးယူပေးရနျ လငျးခေးမွို့နယျမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားက ဝနျကွီးခြုပျထံတိုငျကွား
၂၀။ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြား ခကျြခငျြးရပျတနျ့ရနျ ND-Burma တောငျးဆို
၂၁။ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုအားနညျး၍ ကပျတဲလျကြေးရှာ ဒသေခံမြား စိုးရိမျနေ
၂၂။ ကှတျခိုငျတှငျရကျဆကျ မူးယဈဆေး ဖမျးမိ တရားခံ မမိ
၂၃။ မွနျမာပိုငျနကျထဲ တရားမဝငျ ရောကျလာသညျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့စကျလှမြေားကို သတိပေး ပဈခတျခဲ့ရ
၂၄။ Covid-19 တိုကျဖကျြရေး ကခငျြအရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျ
၂၅။ ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ရာဘာတောထဲ သောငျတငျနသေညျ့ မွနျမာနိုငျငံသား ၁၀ဝ ကြျောအား သှားရောကျချေါယူ
သြှမျးပွညျ တောငျပိုငျး မိုငျးပနျမွို့နယျအတှငျး ကိုဗဈ ၁၉ နှငျ့ပတျသကျပွီးကြေးလကျအတှငျး ကှငျးဆငျးဆေးစဈမှု ပေးနေ သော RCSS/SSA တပျနှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ တိုကျပှဲဖွဈပှါးခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ ဧပွီလ ၁၂ ရကျ ညနေ ၃ နာရီဝနျးကငျြက မိုငျးပနျမွို့နယျ နားဝနျကြေးရှာအနီးတှငျ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျ တပျမတျော( RCSS/SSA)နှငျ့ အစိုးရတပျမတျောတို့ ၁၅ မိနဈခနျ့အကွာ ထိတှမှေု့ ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး RCSS/SSA ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး အုမျခေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ ပွောသညျ။
“ ထိတှမှေု့ဖွဈတာပါ။ ၁၅ မိနဈပါပဲ။ အစိုးရ တပျကကနြျောတို့ ဆကျဆံရေးရုံးကို သတငျးမပို့ဘဲ သှားခငျြတိုငျးသှားတော့ ကနြျောတို့ တပျနဲ့ထိတှမှေု့ဖွဈသှားတာပါ” ဟု ဒုတိယ ဗိုလျမှူးကွီး စိုငျးအုမျခေး က ဆိုသညျ။ RCSS/SSA နှငျ့ ထိတှမှေု့ဖွဈပှါးခဲ့ သော အစိုးရတပျမတျောသညျ မိုငျးပနျမွို့နယျ နားဝနျကြေးရှာအုပျစု ကောငျးပကျရှာနှငျ့နောငျလရှောအကွား အခွစေိုကျသညျ့ ရလခတိုငျး လကျအောကျခံ ခမရ ၁၅၃ တပျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါတပျသညျ ဧပွီလဆနျးကတညျးက ကြေးရှာမြားသို့ ကှငျးဆငျးကာ ကိုဗဈ ၁၉ နှငျ့ပတျသကျပွီး ဆေးစဈမှု၊ ကူညီ ထောကျပံ့မှုပေးနသေညျ့ RCSS/SSA ၏ ကနျြးမာရေးအဖှဲ့အား လိုကျလံဟနျ့တားနသေောတပျဖှဲ့ ဖွဈကွောငျး၊ ရှာသားမြား အားလညျး ဆေးစဈမှုလကျမခံရနျ တားမွဈသညျဟု RCSS/SSA ဘကျက ပွောပါသညျ။ https://burmese.shannews.org/ archives/16139
နိုငျငံအတှငျး COVID-19 ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးကူးစကျရောဂါ ဖွဈပှားနသေညျ့အပျေါ လူမြိုးနှငျ့ ဒသေစှဲမထားကွဘဲ သကျဆိုငျရာ ကနျြးမာရေးဌာနမြား၏ အသိပေးညှနျကွားခကျြမြားကို အလေးထားလိုကျနာဆောငျရှကျကွရနျ ဧပွီ ၉ ရကျနကေ့ ကရငျပွညျ နယျ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ KNU-ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး၏ မှနျ-ကရငျပူးတှဲအုပျခြုပျရေးနယျမွကေ အသိပေးစာ ထုတျပွနျ လိုကျသညျဟု သိရသညျ။
ပွညျပမှ ပွနျလာသူမြား သကျဆိုငျရာကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား၏ သတျမှတျညှနျကွားခကျြမြားအပျေါ လိုကျနာနထေိုငျသှား ရနျနှငျ့ အခကျအခဲရှိလာပါက မှနျ-ကရငျပူးတှဲ အုပျခြုပျရေးနယျမွအေတှငျးရှိ နီးစပျရာဂိတျစခနျးမြားတှငျ အကူအညီ တောငျးခံ နိုငျသညျဟု ၎င်းငျးတို့၏ အသိပေးထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ။ KNU ဒူးပလာယာခရိုငျ ဝငျးရေးမွို့နယျ မှနျ-ကရငျပူးတှဲ အုပျခြုပျရေးနယျမွေ ဥက်ကဋ်ဌ ပဒိုစောဝါးတားတားက “ KNU ဗဟိုက ခမြှတျထားတဲ့ ကိုဗဈရောဂါ အသိပေး လကျကမျးစာစောငျ တှေ ရှာတှမှော လိုကျကပျထားပေးတယျ။ ရှာတှမှော အခကျအခဲဖွဈလာရငျ ကနြျောတို့ကို အခြိနျမရှေး အကူအညီတောငျးနိုငျ တယျပေါ့နျော။ ဒီအခြိနျမှာ မှနျတှေ၊ ကရငျတှေ ဒသေစှဲ၊ ပုဂ်ဂိုလျစှဲထကျ လူသားဝါဒတဈခုထဲနဲ့ ဒီရောဂါကွီးကို ပူးပေါငျး တိုကျဖကျြသှားဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ”ဟု ဧပွီ ၉ ရကျနကေ့ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျရှိ မှနျပွညျသဈပါတီနှငျ့ KNU အဖှဲ့တို့ ပူးတှဲအုပျခြုပျသညျ့ တောငျပေါကျနယျမွမြေားတှငျ ကရငျ၊ ပအိုဝျး၊ မှနျ၊ ဗမာ၊ လောရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား စုပေါငျးနထေိုငျကွသညျ့ နယျမွလေညျးဖွဈပွီး ကြေးရှာအသီးသီးတှငျ ထိုငျးနိုငျငံ မှ ပွနျလာ သူ ၃၇ဝ ဦးကို သတျမှတျထားသညျ့နရောမြားတှငျ စောငျ့ကွညျ့ထားရှိသညျဟု မှနျပွညျသဈပါတီထံမှ သိရသညျ။ ပွညျပမှ ပွနျလညျရောကျရှိလာသူမြားကို သတျမှတျထားသညျ့နရောမြားတှငျ ၁၄ ရကျကွာ နထေိုငျရမညျဖွဈပွီး သတျမှတျ စညျးမဉျြးမြား လိုကျနာမှုမရှိသူမြားကို အရေးယူခံရမညျဟု KNU ဝငျးရေးမွို့နယျက ပွီးခဲ့သညျ့ မတျလ ၂၅ရကျနကေ့ ကွညော ခကျြ ထုတျပွနျထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%8 0%99%e1%80%b a%e1%80%ad%e1%80
ခငျြးပွညျနယျ ဆမီးမွို့မှာတော့ တပျမတျောနဲ့ AA တို့ရဲ့ ပလကျဝတိုကျပှဲကွောငျ့ စဈဘေးရှောငျလာတဲ့သူ သုံးထောငျရှိ နပွေီ ဖွဈပွီး သောကျသုံးရအေခကျအခဲရှိနကွေောငျး ဆမီးမွို့ဒသေခံတဈဉီးက မဇ်ဈိမကိုပွောသညျ။ ဆမီးမွို့ဒသေခံက “စားနပျ ရိက်ခာကတော့ အလှူရှငျတှကေ ပံ့ပိုးပေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဟငျးစားတျောတျောအခကျအခဲရှိပါတယျ။ ပွီးရငျရပွေဿနာ ရှိ တယျ။ ရပွေဿနာဆိုတာက အဲ့ဒီအနီးအနားကမွဈခြောငျးတဈခြောငျးကိုပဲ အားလုံးက သောကျသုံးနကွေတာဆိုတော့ အဲ့ဒီ ရကေ သနျ့ရှငျးတဲ့ရမေဟုတျဘူး။”ဟုပွောသညျ။
မတျလအကုနျက ဆမီးမွို့ရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးတှမှော လူ ၃၀ဝ လောကျ ကိုယျ့အိမျကိုပွနျပွီးနောကျ ယခု ဧပွီလတှငျး စဈဘေးရှောငျသူဦးရေ ပွနျလညျတိုးလာခွငျးဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ အဲ့ဒီစဈဘေးရှောငျစခနျးတှမှော အိမျသာအခကျအခဲလညျး ဖွဈနကွေောငျး ဒသေခံကပွောသညျ။ “ပွဿနာက အိမျသာဆောကျမယျ့နရောပွဿနာ အမြားဆုံးပဲ။ အိမျသာကေ ရလေောငျးအိမျသာ ဆိုနညျးနညျးအဆငျပွတေယျဗြာ။ ရလေောငျးအိမျသာဆောကျဖို့က အခကျအခဲဖွဈနတေယျ။ ပွီးရငျ အိမျသာ ခှကျတှကေလညျး အခကျအခဲရှိတယျ။”ဟုပွောသညျ။
လကျရှိမှာလညျး COVID-19 ရောဂါကွောငျ့ လူစုလူဝေးရှောငျရခြိနျမှာ ထိုစဈဘေးရှောငျ စခနျးတှမှော လူအယောကျ ၃၀ဝဝ ဝနျးကငျြရှိသညျ။ ထို့အပွငျ ရအေခကျအခဲကွောငျ့လညျး လကျကို အခြိနျတိုငျးမဆေးနိုငျသလို မကျြနှာဖုံး (Mask)တှမှော လညျး မလုံလောကျဘဲဖွဈနတေယျလို့ ဒသေခံကပွောသညျ။ “COVID-19 ကာကှယျဖို့နဲ့ ပတျသကျပွီး mask ဆိုလညျးမရှိ ဘူး။ လကျဆေးရညျဆိုတာလညျးမရှိဘူး။ ဒီစဈဘေးရှောငျစခနျးကလူတှဆေီမှာ ရှိမနဘေူး။ လကျတှဘောတှေ ခဏခဏ ဆေးဖို့ဆိုရငျ ရတှေလေညျး မရှိတာဖွဈတယျ။ ပွီးရငျရအေခကျအခဲလညျးဖွဈတယျ။”ဟုပွောသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ ဆမီးမွို့မှာတော့ စဈဘေးရှောငျစခနျး ငါး ခု ရှိပွီး စဈဘေးရှောငျပွညျသူတှထေဲမှာ အမြားစုက ကလေးတှေ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ လကျရှိကာလဟာ COVID-19 ရောဂါကာလဖွဈသျောလညျး ခငျြးပွညျနယျဘကျနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျ ကွားမှာတော့ တပျမတျောနဲ့ အကွမျးဖကျအဖှဲ့ AA တို့ရဲ့တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားလကျြရှိပွီး ဧပွီ ၉ ရကျနဲ့ ၁၀ ရကျနေ့ မှာလညျး ဆမီးနဲ့ ပလကျဝကွားမှာ ထပျမံဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/68904
ထိုငျးနိုငျငံတှငျ သှားရောကျအလုပျလုပျနသေော မွနျမာရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြား အမြားဆုံးပွနျလာသညျ့ ပွညျနယျတခု ဖွဈ သော မှနျပွညျနယျတှငျ ယနေ့ နံနကျပိုငျးက ဆေးရုံ Quarantine ဝငျနသေူ ၃ ဦး သဆေုံးသှားကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါက လူနာ ၃ ဦးသညျ ထိုငျးနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလာသူမြားဖွဈပွီး မှနျပွညျနယျ သံဖွူဇရပျ တှငျ ၂ ဦး နှငျ့ သထုံ တှငျ ၁ ဦး တို့ ဖွဈကွောငျး ယငျးမွို့မြားမှ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားက ဧရာဝတီ သို့ အတညျပွုသညျ။ သထုံမွို့မှ သဆေုံးသှား သော လူနာအမြိုးသားသညျ မတျလ ၈ ရကျနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံသို့ ပွနျလညျရောကျရှိ လာသူဖွဈပွီး ရကျ ၂၀ ကြျော ကွာမှ COVID-19 ရောဂါလက်ခဏာမြားဖွဈပျေါလာပွီး ဆေးရုံသို့ အခြိနျမှီမရာကျရှိခွငျးကွောငျ့ သဆေုံးရခွငျးဖွဈကွောငျး သထုံ မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ ၂ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျကြျောသူ က ပွောသညျ။ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစား ဝနျကွီးဌာန၏ ဧပွီလ ၁၀ ရကျနေ့ နောကျဆုံး ထုတျပွနျထားခကျြအရ မှနျပွညျနယျတှငျ ကြိုကျမရောမှ လူနာတဦးသာ COVID-19 ရောဂါရှိပွီး ကနျြသူမြားမှာ အားလုံး negative ဖွဈကွောငျး တရားဝငျထုတျပွနျ ထားသညျ။
သံဖွူဇရပျမွို့တှငျ ယနေ့ သဆေုံးသှားသော လူနာ ၂ ဦးတှငျ ၁ ဦးမှာ ထိုငျးနိုငျငံမှ ပွနျရောကျပွီး အစိုးရက သီသနျ့ စောငျ့ကွညျ့နရောတှငျ Quarantine အသကျ ၂၀ ဝနျးကငျြအမြိုးသမီးတဦးဖွဈပွီး ၎င်းငျးသညျ နှလုံးရောဂါ အခံရှိခွငျးကွောငျ့ ဧပွီလ ၅ ရကျနတှေ့ငျ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ပွီး ယနတှေ့ငျသဆေုံး သှားခွငျးဖွဈကွောငျး သံဖွူဇရပျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးဉာဏျဟိနျးက ပွောသညျ။
မှနျပွညျနယျတှငျ ထိုငျးနိုငျငံမှ ပွနျလညျရောကျရှိလာသော ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ဦးရသေညျ အနညျးဆုံး ၂ သောငျးဝနျးကငျြ အထိ ရှိကွောငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားထံမှ သိရသညျ။ လကျရှိအခြိနျတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၌ COVID-19 ရောဂါပိုး တှေ့ ရှိသူ ၂၇ ဦးအထိ ရှိလာပွီး သဆေုံးသူ ၃ ဦးအထိ ရှိနပွေီဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/ 10/220474.html
ကရငျပွညျသူလူထုမြား ဖွဈစခေငျြသော ဆန်ဒသဘောထားအရ ၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေး ကောကျပှဲအတှကျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျရာတှငျ ကရငျပါတီမြားအခငျြးခငျြးမဲဆန်ဒနယျမွေ မထပျအောငျ ကွိုးပမျးသှားမညျဖွဈကွောငျးပွညျနယျ အခွစေိုကျ ကရငျ ၂ ပါတီမှ ထုတျဖျော ပွောဆိုလိုကျသညျ။
ပွညျနယျအခွစေိုကျ ကရငျပါတီမြား၏ လာမညျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ အခွအေနေ မြားနှငျ့ပတျသကျ၍ မဲဆန်ဒရှငျ ကရငျပွညျသူလူထုမြားအကွား ရှုပျထှေးဝဝေါးမှုမြား ဖွဈပျေါနသေညျ့အပျေါ ထိုကရငျနိုငျငံရေးပါတီ ၂ ပါတီ၏ ပါတီခေါငျးဆောငျမြားအား ဆကျသှယျမေးမွနျးရာတှငျ ယခုလို ထုတျဖျောပွောဆိုလိုကျခွငျးလညျးဖွဈသညျ။ ကရငျအမြိုးသား ဒီမိုကရကျတဈပါတီ-KNDP ဥက်ကဋ်ဌ မနျးအောငျပွညျစိုးက “ပွညျသူလူထု ဖွဈစခေငျြတဲ့ ဆန်ဒကို အကောငျအထညျဖျောခငျြသညျ့ အတှကျ သူ(PSDP)ရော ကနျြတဲ့ ကရငျပါတီတှနေဲ့ပါ မဲဆန်ဒနယျမွတေဈခုမှာ မထပျအောငျတော့ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစား ညှိနှိုငျးသှားပါမယျ” ဟု ယမနျနေ့ (ဧပွီ ၉ ရကျ)တှငျ ပွောသညျ။
ထို့အတူ KNDP နှငျ့ ဖလုံ-စဝျေါဒီမိုကရကျတဈပါတီ -PSDP ပါတီ ၂ ခု စလုံးမှ ကရငျပွညျနယျအတှငျး အဓိကထား ယှဉျပွိုငျ မညျဟု အသီးသီး ထုတျဖျောပွောဆိုမှုမြားရှိခဲ့သညျ့အတှကျ မဲဆန်ဒနယျ အငွငျးပှားမှုကိစ်စမြားမှ အစပွုကာ ကရငျပါတီမြား အခငျြးခငျြး မသငျ့မွတျသညျ့ အခွအေနမြေားဖွဈလာမညျကို စိုးရိမျကွောငျး မဲဆန်ဒရှငျ ကရငျပွညျသူလူထုအခြို့၏ ထုတျဖျော ပွောဆိုမှုမြားလညျး ရှိခဲ့သညျ။
PSDP ဥက်ကဋ်ဌ စောခငျမောငျမွငျ့က “မဲဆန်ဒနယျတဈခုမှာ ကရငျပါတီ ၂ ခုဝငျတာမြိုး လုံးဝ ရှောငျရှားသှားမယျလို့ သဘောတူ ထားတယျ။ မဲဆန်ဒနယျလေး နညျးနညျးတော့ ခှဲရမှာပေါ့။ အဓိကက ကရငျပါတီ အခငျြးခငျြး ပွနျပွိုငျ တာတော့ လုံးဝကို ရှောငျရှားသှားမယျ” ဟုပွောသညျ။ လကျရှိတှငျ ကရငျပွညျနယျအခွစေိုကျ(KNDP) နှငျ့ ဖလုံ-စဝျေါဒီမိုကရကျတဈပါတီ (PSDP)၊ ရနျကုနျ အခွစေိုကျ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ(KPP) နှငျ့ ကရငျအမြိုးသားပါတီ (KNP)တို့ တရားဝငျ နိုငျငံရေးပါတီမြားအဖွဈ ရပျတညျ လှုပျရှားလကျြရှိသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%9c%e1%80%b0%e1%80%91%e1%80 %af%e1%80%86%e1%82%
ပလကျဝမွို့ စညျပငျဝနျထမျးတဦးကို ရက်ခိုငျ့တပျမတျော(အအေေ)အဖှဲ့က ဖမျးဆီး ချေါဆောငျသှားတယျလို့ ပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့ တာဝနျရှိသူတဦးက ပွောပါတယျ။ အအေနေဲ့ တပျမတျောတို့ကွား ဧပွီလ ၁၁ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးက ပလကျဝမွို့ ပတျပတျ လညျမှာ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
အဲဒီတိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ပလကျဝမွို့ ဧရိယာထဲရှိ ခရဈယာနျဘုရားကြောငျးအနီး တောငျကုနျးပျေါကို လကျနကျကွီးတလုံး ကရြောကျပေါကျကှဲခဲ့ပွီး အပိုငျးအစတှဟော ပလကျဝမွို့ ရဲစခနျးနဲ့ ဈေးနားအထိ ကရြောကျခဲ့တယျလို့ ခငျြးပွညျနယျ စညျပငျ ဝနျကွီး ဦးစိုးထကျက ပွောပါတယျ။ တိုကျပှဲတှေ ဖွဈပှားပွီးနောကျ အသကျ ၄၀ နဲ့ ၅၀ ကွားရှိ စညျပငျဝနျထမျးတဦးကို အအေအေဖှဲ့က ညပိုငျးမှာ လာရောကျဖမျးဆီးသှားပွီး ဘာကွောငျ့ ဖမျးဆီးတယျဆိုတာကိုတော့ မသိရှိရသေးဘူးလို့ သူက ပွောပါတယျ။
အစိုးရက အအေအေဖှဲ့ကို အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးအဖွဈကွညောထားတဲ့အတှကျ အဲဒီဖွဈစဉျနဲ့ပတျသကျလို့ အအေေ ဘကျကို ဆကျသှယျမေးမွနျးဖို့ ဥပဒကွေောငျးအရ အခကျအခဲတှေ ရှိနပေါတယျ။ တိုကျပှဲတှကွေောငျ့ ပလကျဝမွို့မှာ ဧပွီ ၁၁ ရကျနေ့ ညနပေိုငျးထိ စဈဘေးရှောငျ အိမျထောငျစု ၈၄၀၊ လူဦးရေ ၃၆၅၇ ဦး၊ ဆမီး မှာ အိမျထောငျစု ၆၇၆၊ လူဦးရေ ၂၈၄၁ ဦး ရှိနပွေီလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/381981
မှနျပွညျနယျမှာ သထုံမွို့အပါအဝငျ မွို့နယျ ၁၀ ခုမှာ ရှိတဲ့ စောငျ့ကွညျ့ရေးစငျတာတှကေ စောငျ့ကွညျ့ရကျ ၁၄ ရကျပွညျ့ပွီးသူ တှအေပွငျ မပွညျ့သေးသူ ပွညျတျောပွနျအားလုံးကို ဧပွီ ၁၀ ရကျနကေ့ နအေိမျတှကေို ပွနျလညျစလှေတျခဲ့တယျလို့ သိရ ကွောငျး မှနျပွညျနယျလှတျတျော သထုံလှတျတျောအမတျ ဒျေါခိုငျခိုငျလဲ့က ဘီဘီစီကို ပွောပါတယျ။
မှနျပွညျနယျအတှငျးက ပွညျတျောပွနျတှအေနကျ ဧပွီ ၁၀ ရကျနအေ့ထိ စောငျ့ကွညျ့လူနာထဲက သဆေုံး သူ ၁၀ ဦးအထိရှိ လာပွီလညျး ဖွဈပါတယျ။ ‘ ‘ မနကေ့ သောကွာနကေ့ အကုနျလုံးကို ပွနျလှတျလိုကျတာ။ ဘာကွောငျ့လှတျတယျဆိုတာလညျး မသိရဘူး။ ဒီလူတှကေို နအေိမျမှာပဲ ကှာရနျတငျးလုပျမယျလို့ သိရတယျ။ ဒါပမေယျ့ စောငျ့ကွညျ့ စငျတာမှာတောငျ စညျကမျး လိုကျနာမှုရှိတာ မဟုတျဘူး။ ၆ ပခှောဆို ကုတငျတှေ ကပျထားတယျ။ နအေိမျပွနျရောကျတော့လညျး အိမျမှာမနဘေူး။ ဆိုငျကယျနဲ့ လမျးထှကျနကွေတယျ”လို့ ဒျေါခိုငျခိုငျလဲ့က အခွအေနကေို ပွောပွပါတယျ။
ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာနကနေ ပွညျတျောပွနျဝငျလာသူတှကေို စောငျ့ကွညျ့ရေးစငျတာမှာ ၁၄ ရကျ စောငျ့ကွညျ့မှု ခံယူဖို့နဲ့ ငွငျးဆနျပါက ဥပဒအေရအရေးယူဖို့ ထုတျပွနျထားတာ တှလေညျးရှိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သထုံမွို့နယျအတှငျး မှာတော့ စညျးကမျးမလိုကျနာသူတှကေို အရေးယူတာမြိုးတော့ မတှရေ့ဘူးလို့လညျး ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခိုငျခိုငျလဲ့ ကပွောပွပါ တယျ။ https://www.bbc.com/burmese/burma-52255202
ရခိုငျပွညျနယျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့နယျ ကြောကျဆိပျကြေးရှာတှငျ ဧပွီလ ၁၃ ရကျနေ့ နံနကျ ၇ နာရီကြျောခနျ့က လကျနကျကွီး ကညျြထံ ကရြောကျပေါကျကှဲ၍ အရပျသား (၉) ဦးသဆေုံးပွီး ၆ ဦးကို အရေးပျေါဆေးရုံပို့ဆောငျထားရကွောငျး ပုဏ်ဏားကြှနျး မွို့နယျ ပွညျနယျလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသနျးတငျက ပွောသညျ။ အဆိုပါ လကျနကျကွီး ကညျြကရြောကျပေါကျ ကှဲမှုကွောငျ့ ကြောကျဆိပျကြေးရှာသား ၄ ဦးမှာ ပှဲခငျြးပွီး သေးဆုံးခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ပုဏ်ဏားကြှနျးဆေးရုံတှငျ ၃ ဦးသဆေုံးခဲ့ခွငျး ဖွဈကာ ၈ ဦးကို စဈတှဆေေးရုံသို့ပို့ဆောငျစဉျလမျးတှငျ ၂ ဦး ထပျမံသဆေုံးခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ကြောကျဆိပျကြေးရှာသို့ ကိုယျတိုငျသှားရောကျခဲ့သညျ့ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသနျးတငျက “ကြောကျဆဈရှာမှာ ပှဲခငျြးပွီး ဆုံးတာက ၄ ဦး၊ ပုဏ်ဏားကြှနျးဆေးရုံမှာ ဆုံးတာ ၃ ဦး၊ နောကျထပျ စဈတှကေို အရေးပျေါ လူနာတငျလို့ လမျးမှာ ဆုံးတာက ၂ ဦး ပေါငျး ၉ ဦး သဆေုံးတာ။” ဟု ပွောသညျ။ သဆေုံးသူမြားမှာ ထကျမွတျဦး (၁၃) နှဈ၊ ဒျေါသနျးသနျးစိုး (၂၅)နှဈ၊ ဦးလူလှခြေ (၁၈)နှဈ၊ ဦးနီထှနျး (၂၆)နှဈ၊ ဦးမောငျမောငျခြေ (၂၂) နှဈနှငျ့ အောငျဆနျးနိုငျ ၁၆ နှဈ တို့ အပါအဝငျ ပေါငျး (၉) ဦး ဖွဈကွောငျး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးအောငျသနျးတငျက အတညျပွုပွောသညျ။
လကျနကျကွီးကညျြ ကရြောကျပေါကျကှဲသညျ့ ကြောကျဆိပျကြေးရှာသညျ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့ပျေါနှငျ့ (၂) မိုငျခနျ့သာ ဝေးကှာပွီး ကြေးရှာအနီးတှငျ တိုကျပှဲဖွဈပှားခွငျးမရှိဟု ဒသေခံမြားက ပွောသညျ။ မညျသညျ့ဖကျက ပဈခတျလိုကျသညျ့ လကျနကျကွီး ကညျြဆံဆိုသညျကိုတော့ အတိအကြ မသိရသေးပေ။ ပုဏ်ဏားကြှနျးမွို့အဝငျတှငျတညျရှိသညျ့ အမှတျ (၅၅၀) ခွလေငျြခွမွေနျ တပျရငျး ရှိကွောငျး ဒသေခံမြားက ပွောဆိုကွသညျ။ အဆိုပါဖွဈစဉျ နှငျ့ ပတျသကျပွီး တပျမတျောသတငျးမှနျ ပွနျကွားရေး အဖှဲ့ကို မဇ်ဈိမက တယျလီဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျခဲ့သျောလညျး ဖုနျးလကျခံဖွကွေားခွငျး မရှိပေ။
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ တပျမတျောနှငျ့ ရခိုငျ့လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့ (AA) တို့ နှဈဖကျတိုကျပှဲ ဖွဈပှားနသေညျမှာ (၁) နှဈကြျော ကွာမွငျ့လာခဲ့ပွီဖွဈကာ အရပျသားမြားသဆေုံးမှုလညျး မွငျ့တကျလာနသေညျ။ ယငျးအပွငျ တိုကျပှဲဖွဈပှားနသေညျ့ ရခိုငျ မွောကျပိုငျးဒသေတှငျ သိနျးခြီသော ဒသေခံမြားမှာလညျး စဈဘေးရှောငျ စခနျးမြားတှငျ ခိုလှုံနကွေရသညျ။ http://www.miz zimaburmese.com/article/68936
ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး မူဆယျခရိုငျ မူဆယျမွို့တှငျ မွနျမာ့ဆကျသှယျရေးဝနျးရှိ MPT Mobile ဝနျဆောငျမှုရုံးကို ဧပွီလ ၁၂ ရကျ ည ၁၀ နာရီ ၄၀ မိနဈအခြိနျခနျ့က လကျပဈဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဖွငျ့ နှဈကွိမျ ပဈဖောကျခံရကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ပဈဖောကျမှု ဖွဈစဉျကွောငျ့ MPT Mobile ဝနျဆောငျမှုရုံး၏ အတှငျးအပွငျ ပကျြစီးခဲ့ကာ မွနျမာဆကျသှယျရေး ရုံးဝနျး အတှငျး MPT Mobile ဝနျဆောငျမှုရုံးဘေးကပျရပျ ရပျထားသော Honda Fit အမြိုးအစားကား နောကျမှနျ၊ Wish အမြိုးအစား ကားနောကျမှနျနှငျ့ KIA အမြိုးအစား ကားအလယျမှနျတို့အပွငျ အနီးအနားရှိ အိမျတခြို့မှ ပွုတငျးပေါကျမှနျတခြို့ ကှဲခဲ့ကာ ထိခိုကျဒဏျရာရရှိမှု မရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယငျးဖွဈစဉျ နှငျ့ ပတျသတျ၍ မူဆယျမွို့မရဲစခနျးကို ဆကျသှယျမေးမွနျးရာ ကနဦး စုံစမျးဖျောထုတျခကျြအရ လကျပဈဗုံးဟု ယူဆရသော အရာဖွငျ့ နှဈကွိမျပဈဖေါကျခံရပွီး အမှုကိုဆကျလကျစုံစမျးဖျောထုတျလကျြရှိကွောငျးသာ တာဝနျရှိသူ တဈဦးက ပွောကွားသညျ။ https://news-eleven.com/article/169027
မျောခြီးဒသေ Facility Quarantine ထားရှိသညျ့ နရောတှငျ အသငျ့ထားရှိရမညျ့ လကျဆေးရနှေငျ့ စောငျ၊ ခေါငျးအုံးမြား ထားရှိ တာ မတှရေ့ကွောငျး ဖားဆောငျး မဲဆန်ဒနယျ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဒျေါနနျးထှေးသူက ပွောသညျ။
“သိနျးငါးရာထဲက ဒီ COVID 19 အတှကျ မျောခြီးဒသေကို ( သိနျး ၁၅၀ ) လှူဒါနျးပါတယျပွောပွီးမှ အဲဒီ Facility Quarantine ( စောငျ့ကွညျ့လူနာ တှထေားတဲ့ နရော )ကို သှားစဈလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ ဘာမှအဆငျသငျ့ မရှိတာတှရေ့တယျ”လို့ မဇ်ဈိမ သတငျးဌာနကို ပွောသညျ။ မျောခြီးဒသေ အကွီးစား သတ်တုတူးဖျော ထုတျလုပျရေး ကုမ်ပဏီမှ မတညျ၍ မျောခြီး ဒသေ သဘာဝ ဘေး အန်တရာယျကာကှယျရေး ရံပုံငှေ သိနျး ၅၀ဝ အထဲမှ ငှကေပျြ သိနျး ၁၅၀ကို COVID 19 ရောဂါ တိုကျဖကျြ ရေးအတှကျ အသုံးပွုရနျ လှူဒါနျးခဲ့ကွောငျး နနျးထှေးသူက ရှငျးပွသညျ။
“ဒီငှတှေကေို သူတို့က ကျောမတီဖှဲ့ပွီးမှ ဒီသဘာဝဘေးအတှကျ သိနျး ၁၅၀ လှူထားတယျဆိုရငျ ကျောမတီကနေ လိုအပျတဲ့ ပံ့ပိုးမှု ပစ်စညျး ကိရိယာတှေ ဖွညျ့ပေးရမှာလေ သူတို့မှာ တာဝနျရှိတယျ”လို့ ဆိုသညျ။ မျောခြီးဒသေ လိုခါးလိုတိုကျနယျဆေးရုံ အရေးပျေါ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှု စီမံခနျ့ခှဲမှုကျောမတီတှငျ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျ၊ မျောခြီး အုပျခြုပျရေးမှူး၊ ရပျမိရပျဖမြား၊ ကုမ်ပဏီပိုငျရှငျမြား စုစုပေါငျး ၁၉ ဦးပါသညျဟု သိရသညျ။
အဆိုပါ ကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျပွီး မျောခြီးကြေးရှာအုပျစုမှ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးကြျောကငျးကတော့“ စောငျ့ကွညျ့ လူနာ ၁၀ ယောကျ ဆိုရငျ တဈရကျကို ခွောကျသောငျးလောကျရှိတယျ အစိုးရက ဘာမှ မပေးဘူးလေ၊ ငါတို့ အဲဒီ ( သိနျး ၁၅၀ ) ထဲက သုံးထား တာ ဖွဈတယျ”လို့ ဆိုသညျ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/68878
ဖားကနျ့ ဥရုခြောငျးရှငျးလငျးရေးလုပျသညျ့နရောတှငျ ရှတေူးဖျောရေးလုပျငနျးမြား လုပျနသေညျမှာ အစိုးရမှ တရားဝငျခှငျ့ပွု ထားခွငျး ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
တာမခံ ဟောငျပါးဖကျ ဥရုခြောငျးရှငျးလငျးရေးလုပျနသေောအဖှဲ့မြားမှ ခြောငျးရှငျးလငျးရေးခေါငျးစဉျဖွငျ့ ကြောကျစိမျးနှငျ့ ရှတေူးဖျောလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျ နကွေသညျဟု ဖားကနျ့ ဒသေခံတဈခြို့ ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ဆကျသှယျပွောဆိုမှု မြား ရှိခဲ့သညျ။ ခြောငျးရှငျးလငျးရာတှငျလိုအပျသော စကျယန်တရားမြားကို အစိုးရမှ မတတျနိုငျသောကွောငျ့ လုပျငနျးရှငျမြားကို ဖိတျချေါကာ ရရှိလာသောသယံဇာတမြားကို လုပျထုံးလုပျနညျးအရ ဆောငျရှကျရနျ သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့ကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ သယံဇာတနှငျ့သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး ဝနျကွီး ဦးဒရှီလဆိုငျးက ပွောသညျ။
‘‘ဥရုခြောငျးရှငျးလငျးတဲ့အဖှဲ့က ဥရုခြောငျးကို ပိတျတနျးလုပျပွီး ကြောကျစိမျးတူးဖျောတယျ။ နောကျ ခြောငျးရှငျးလငျးရေး ပွုလုပျတယျဆိုပွီး ဥရုခြောငျးထဲကိုဘဲ ရှမြှေောပွနျတိုကျခတြယျ။ အဲ့လိုလုပျနတော့ ခြောငျးရှငျးလငျးရေး ဘယျလောကျဘဲ လုပျလုပျ ထိရောကျမှုရှိမှာ မဟုတျဘူး။ ပွီးရငျ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး အမွငျနဲ့ကွညျ့ရငျလညျး ဥပဒနေဲ့ မညီညှတျ ဘူး။ အစိုးရကိုလညျး ဒါကို ခှငျ့မပွုပေးဖို့ တောငျးဆိုခငျြတယျ’’ဟု ပွောသညျ။
ဥရုခြောငျးရှငျးလငျးရေးကို ယခငျ အမြားပိုငျ ကုမ်ပဏီမြားက တာဝနျယူ ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးဖွဈသျောလညျး ယခုနှဈမှစ၍ ပွညျထောငျစု၏ ညှနျကွားခကျြနှငျ့အညီ ပွညျနယျအစိုးရ နှငျ့အတူ မွို့နယျအုပျခြုပျရေးမှူးမြား၊ စညျပငျသာယာရေးအဖှဲ့၊
သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေး၊ ကြောကျမကျြတူးဖျောရေး၊ ကြေးလကျဒသေဖှံ့ဖွိုးရေး၊ မွို့နယျရဲတပျဖှဲ့၊ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ(၃)ဦးနှငျ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျး (၂)ဦး အသီးသီးပါဝငျကာ လုပျဆောငျနကွေောငျး သိရပါသညျ။ ဥရုခြောငျး ရှငျးလငျးရေးအောကျ ရှတေူးဖျောရနျ ပွညျနယျအစိုးရထံ ကုမ်ပဏီ ၁၆ ခုတငျပွထားရာမှ ကုမ်ပဏီ ၈ ခု ကိုသာ ခှငျ့ပွုထား ကွောငျး သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/09/%e1%80%a5%e1%80%9b%e1%80%af% e1%80%81%e1%
ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ဖွဈပှားနသေော တိုကျပှဲမြားကို ရပျဆိုငျးပွီး COVID -19 ကပျရောဂါကို မွနျမာတနိုငျငံလုံး ပူးပေါငျး တိုကျဖကျြရနျ ရခိုငျပွညျလှတျမွောကျရေးပါတီ (ALP) က ဧပွီလ ၁၂ ရကျတှငျ ကွညောခကျြတစောငျထုတျပွနျကာ တိုကျတှနျး လိုကျသညျ။ ALP ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ တိုကျပှဲမြား ရပျဆိုငျးရနျ၊ မောငျတောဒသေ နယျစပျဂိတျ လူဝငျလူထှကျကို တငျးကွပျ ရနျနှငျ့ နိုငျငံရေးအကဉျြးသားမြားကို လှတျပေးရနျဟူသညျ့ အခကျြသုံးခကျြကို အဓိက ဖျောပွထားပွီး ယငျးအခကျြမြားကို ပွညျသူမြား၊ သကျဆိုငျရာအဖှဲ့မြား၊ နိုငျငံတျောအကွီးအကဲမြားကို သိရှိစလေိုကွောငျး ALP ဒုတိယ ဥက်ကဋ်ဌ ဒျေါစောမွ ရာဇာလငျး က ဧရာဝတီသို့ ပွောသညျ။
ဒျေါစောမွ ရာဇာလငျး က “ပွညျသူတှဆေီကသတငျးတှရေပါတယျ။ အနောကျဘကျဂိတျဟာ ပှငျ့နတေယျပေါ့။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ မှာ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုက တျောတျောကို မြားနပေါပွီ။ ရောကျလာတဲ့သူတှကေို သကျဆိုငျရာ ဌာနတှကေ Quarantine ဘယျလို လုပျမလဲ။ သူတို့တှကေို ဘယျလိုနရောခမြလဲဆိုတာ စဉျးစားသငျ့တာ ၁ ခကျြဖွဈသလို ဂိတျတှကေို အဝငျအထှကျ အားလုံး ပိတျထားသငျ့တယျလို့ ထငျပါတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျရေးအတှကျ အစိုးရ၏ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနက မွို့ပျေါရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးမြားတှငျ အသိ ပညာပေးမှုမြားရှိနသေျောလညျး၊ ကြေးလကျဒသေရှိစဈဘေးရှောငျစခနျးမြားအထိ အသိပညာပေးနိုငျမှုမရှိကွောငျး၊ ကြေးလကျ ရှိ စဈဘေးရှောငျစခနျးမြားတှငျ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား၏ ကူညီမှုဖွငျ့ အသိပညာပေးမှုမြား လုပျဆောငျနရေကွောငျး ရခိုငျ တိုငျးရငျးသားမြား ကှနျဂရကျ (REC) တှငျးရေးမှူး ကိုဇျောဇျောထှနျး က ပွောသညျ။
ALP သညျ ရခိုငျတှငျ ဖိနှိပျမှုမှ လှတျကငျးရေးနှငျ့ တနျးတူရေးအတှကျ ၁၉၆၇ ခုနှဈကတညျးက လကျနကျကိုငျ တိုကျပှဲဝငျခဲ့ သောအဖှဲ့ ဖွဈသညျ။ ၂၀၁၂ ခုနှဈတှငျ အစိုးရနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေး ညှိနှိုငျးဆှေးနှေးမှုမြား စတငျပွုလုပျလာခဲ့ပွီး၊ ထိုနှဈဧပွီလတှငျ နှဈဘကျအပဈရပျ သဘောတူညီခကျြကို လကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ။ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ စဈဘေးရှောငျစခနျး ၁၃၂ ခုရှိနပွေီး စဈဘေးဒုက်ခသညျ တသိနျးခွောကျသောငျးကြျောရှိနကွေောငျး ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြားကှနျဂရကျ (REC) ထံမှ သိရသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/13/220599.html
၁၃။ တောငျကွီးမွို့ ညောငျရှဟေျောကုနျး ရပျကှကျ၊ နယျမွသေုံးခုနှငျ့ လမျးသုံးခုတို့ကို ဆေးဖွနျးပွီး ၂၁ ရကျ Lockdown ပွုလုပျထား
ရှမျးပွညျနယျမွို့တျော၊ တောငျကွီးမွို့၊ ညောငျရှဟေျောကုနျးရပျကှကျ၊ နယျမွသေုံးခုနှငျ့ လမျးသုံးခုတို့ကို ဆေးဖွနျးပွီး ၂၁ ရကျ Lockdown ပွုလုပျထားကွောငျး ညောငျရှဟေျောကုနျးရပျကှကျ၊ အုပျခြုပျရေးမှူးထံမှ သိရသညျ။
ညောငျရှဟေျောကုနျးရပျကှကျ၊ နယျမွေ (၅) (၆) (၇) တို့ရှိ ရှမျးလမျး၊ ဥသွလမျးနှငျ့ မတ်ေတာလမျးတို့ကို ယမနျနေ့ ညဘကျ အခြိနျတှငျ လမျးမြား၊ ပိုးတှလေူ့နာနအေိမျနှငျ့ မျောတျောယာဉျတို့ကိုလညျး ဆေးဖွနျးခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့ပွီး၊ အဆိုပါ လမျး (၃) လမျးကို (၂၁) ရကျ Lockdown ပွုလုပျကာ ခတ်ေတပိတျထားပွီး၊ အမြားပွညျသူ သိရှိနိုငျစရေနျအတှကျ ညောငျရှဟေျော ကုနျးရပျကှကျ၊ လမျးထိပျရှိ ရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူးရုံးမှ အသံခြဲ့စကျဖွငျ့ လိုကျနာသိရှိနိုငျစရေနျ ကွညောပေးနကွေောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ လမျး (၃) ခုထိပျတှငျ တာဝနျရှိသူမြား စောငျ့ကွပျနပွေီး၊ လမျးသုံးခု အတှငျးရှိ နအေိမျမြားမှ ပွငျပ မထှကျ ခှာစဘေဲ၊ လုံခွုံရေး တာဝနျရှိသူမြားက PPE ဝတျစုံမြားဖွငျ့ စားသောကျစရာမြားကို ဝယျခွမျးပွီး သှားရောကျ ပေးပို့နကွေောငျး သိရသညျ။
၎င်းငျး၏ မိသားစုဝငျဖွဈသော လာကွိုခဲ့သညျ့ မိခငျနှငျ့ အမဖွဈသူတို့သညျ ဆေးရုံတှငျ မနဘေဲ နအေိမျကို ပွနျလာသဖွငျ့ သကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူမြားမှ ညောငျရှဟေျောကုနျးရပျကှကျ နအေိမျကို လာရောကျ ချေါဆောငျခွငျးဖွဈပွီး စဝျစံထှနျး ဆေးရုံ ရှိ သီးသနျ့ဆောငျတှငျ ထားရှိစောငျ့ကွညျ့လကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ပိုးတှလေူ့နာ (Case-029) လမျးကွုံလိုကျစီးခဲ့သော ကလောမွို့ နထေိုငျသူကိုလညျး Quarantine ဆောငျရှကျထားပွီး၊ လမျးခရီးတှငျ ကလောမွို့၊ နှဈထပျလမျး ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေးဂိတျနှငျ့ တောငျလေးလုံးတို့ရှိ စဈဆေးရေး ဂိတျတို့ တှငျ လညျး ကနျြးမာရေး စဈဆေးခဲ့ကွသဖွငျ့ အဆိုပါ ဂိတျမြားတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျနကွေသော စတေနာ့ဝနျထမျးမြားကိုလညျး Quarantine ခံယူရနျဆောငျရှကျသငျ့ကွောငျး မွို့ခံမြားက ဝဖေနျနကွေသညျ။ https://news-eleven.com/article/168935
၁၄။ ဖားကနျ့ မွို့ အဝငျအထှကျကို စတငျစဈဆေးတော့မညျဟု ပွညျနယျအစိုးရပွော
ကခငျြပွညျနယျ ဖားကနျ့မွို့သို့ လူသဈမြားထပျမံဝငျရောကျမှု မရှိစရေနျ ဧပွီလ ၁၁ရကျနမှေ့စကာ လူအဝငျအထှကျ စိစဈတော့ မညျဟု သိရသညျ။ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ Covid-19 ကူးစကျရောဂါစိုးရိမျသညျ့အတှကျ ကွိုတငျကာကှယျနိုငျရနျ ဆောငျရှကျရခွငျး ဖွဈကွောငျး ကခငျြပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျောပွောသညျ။
“ဒသေခံတှစေိုးရိမျတာကတော့ တဈဖကျမှာပွနျလာတဲ့သူတှေ ထိုငျးကပွနျလာတဲ့သူရှိတယျ။ တရုတျကပွနျလာတဲ့သူတှေ ရှိတယျ။ အလုပျမရှိအကိုငျမရှိတဲ့သူတှကေ ဖားကနျ့ဒသေမှာ ရမေဆေးအဖွဈဝငျလာနိုငျတယျ။ ထိနျးခြုပျဖို့ ပိုခကျသှားမယျဆို ပွီး ဒသေခံတှတေငျပွတဲ့တှကျ ကနြျောတို့က ၁၁ ရကျနပွေီ့းတော့ စီစဈပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ အဲလိုစီစဈတဲ့နရောမှာ ဒသေခံ မှတျပုံတငျကိုငျဆောငျတာ ဟုတျမဟုတျ၊ ကြောကျမကျြကုမ်မဏီမှာလုပျကိုငျနတေဲ့သူ၊ ခုနောကျပိုငျးဆိုရငျ သကျဆိုငျရာ က ရပျကှကျထောကျခံစာပါမပါ၊ မပါဘူး မဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ အဝငျမခံပါဘူး။ ပွနျလှတျမှာဖွဈပါတယျ။” ဟု ကခငျြပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျော ပွောသညျ။
ယခုအစီစဉျသညျ ဖားကနျ့မွို့သို့ ဝငျလာမညျ့သူမြားကိုသာ စဈဆေးမညျဖွဈပွီး ဖားကနျ့မွို့မှ ထှကျလာသူမြားအား စဈဆေး မညျ မဟုတျဘဲကွောငျး ညှနျကွားရေးမှူး ဦးဇျောဇျော ပွောသညျ။ ကခငျြပွညျနယျအတှငျး ဧပွီလ ၈ ရကျနထေိ့ စာရငျးမြားအရ Home Quarantine ထားရှိသူ ဦးရေ ၁၄၆၀ ကြျောရှိပွီး၊ Facility Quarantine ဦးရေ ၈၄၀ ရှိကာ စုစုပေါငျး ပွညျပမှပွနျလညျ ရောကျရှိလာသညျ့ လူဦးရေ ၃၀၃၆ ဦးရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာဌာနမှ သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/20 20/04/10/%e1%80%96%e1%80%ac%e1%80%b8%e1%80%80%e1%
၁၅။ ဘီးလငျးမွို့နယျ၊ ညောငျသာယာကြေးရှာတှငျ ပဋ်ဌာနျးသိမျးပှဲ၌ ခေါကျဆှဲကွျော နှငျ့ ရခေဲမုနျ့ ကြှေးမှေးရာမှ ရဟနျး၊ သာမဏနှေငျ့ ရှာသူ၊ ရှာသား ၄၀ ကြျော အစာ အဆိပျသငျ့မှုဖွဈပှား
ဘီးလငျးမွို့နယျ၊ ဆငျအငျးကြေးရှာအုပျစု၊ ညောငျသာယာကြေးရှာတှငျ ဧပွီလ ၁၂ ရကျ နံနကျပိုငျးက ပွုလုပျခဲ့သညျ့ ပဋ်ဌာနျး သိမျးပှဲ၌ ခေါကျဆှဲကွျောနှငျ့ ရခေဲမုနျ့ ကြှေးမှေးရာမှ ရဟနျး၊ သာမဏနှေငျ့ ရှာသူ၊ ရှာသား ၄၀ ကြျော အစာအဆိပျသငျ့မှု ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“ညောငျသာယာရှာ ဘုနျးကွီးကြောငျးဓမ်မာရုံမှာ ပွုလုပျတဲ့ ပဋ်ဌာနျးသိမျးပှဲမှာ မနကျပိုငျးမှာ ဘုနျးကွီးတှကေို ခေါကျဆှဲကွျော ကပျ တယျ။ နောကျလူတှစေားကွတယျပေါ့။ နောကျနေ့ ဆှမျးကပျပွီး ရခေဲမုနျ့ ကြှေးတယျလို့သိရတယျ။ အမြားစုကတော့ ညောငျသာယာရှာကဘဲ။ တခွားရှာတှကေတော့ မလာကွဘူးပေါ့” ဟု ညောငျသာယာကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးသာကြျောက ပွောကွားသညျ။ “သူတို့က အနျကွတယျ။ ဝမျးသှားတယျ။ ဒီလောကျပါဘဲ။ အခွအေနကေတော့ မစိုးရိမျရပါဘူး။ သူတို့ကို တောငျစှနျး တိုကျနယျဆေးရုံကတဆငျ့ ဇုတျသုတျတိုကျနယျဆေးရုံနဲ့ ဘီးလငျးမွို့နယျ ပွညျသူ့ဆေးရုံကို ပို့ဆောငျပေးထား ကွပါတယျ” ဟု ဦးသာကြျောက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။
ဆငျအငျးကြေးရှာအုပျစု၊ ညောငျသာယာကြေးရှာရှိ ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျ ပွုလုပျသညျ့ ပဋ်ဌာနျးသိမျးပှဲ၌ ခေါကျဆှဲကွျော ကြှေးမှေးကွောငျး၊ တခြို့လညျး ပါဆယျယူသှားတာ မြိုးလညျးရှိကွောငျး၊ တခြို့ကလညျး ဆှမျးဆကျကပျ ကနျြနခေဲ့ကွောငျးနှငျ့ ယငျးအခွအေနမှေ အစာအဆိပျသငျ့သလို ဖွဈကွခွငျး ဖွဈကွောငျး ဘီးလငျးမွို့နယျ မဲဆန်ဒနယျမွေ အမှတျ (၁) ပွညျနယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒေါကျတာခငျနိုငျဦးက ပွောကွားသညျ။ ၎င်းငျးက ဆကျလကျပွီး “လောလောဆယျ ရဟနျး (၂) ပါး၊ ကိုရငျ (၄) ပါး၊ အမြိုးသား (၂၅) ဦနဲ့ အမြိုးသမီး (၁၂) ဦးကို ဘီးလငျးမွို့နယျ ပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးကို တငျပို့ပေးထား ကွပါတယျ။ နောကျ ဇုတျသုတျတိုကျနယျဆေးရုံမှာ တဈဦးလို့တော့ ပွောကွတယျ။ အားလုံး (၄၄) ဦးဖွဈသှားမယျပေါ့” ဟု ပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ ညောငျသာယာကြေးရှာ၌ အစာအဆိပျသငျ့မှု ခံစားခဲ့ကွရသညျ့ လူနာမြားအား ဘီးလငျးမွို့နယျ မီးသတျဦးစီးဌာနမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ ဘီးလငျးမွို့နယျအတှငျးရှိ လူမှုကူညီကယျဆယျရေးအဖှဲ့မြားမှ လူနာယာဉျမြားဖွငျ့ ဘီးလငျးမွို့နယျ ပွညျသူ့ ဆေးရုံကွီးနှငျ့ ဇုတျသုတျတိုကျနယျ ဆေးရုံမြားသို့ ပို့ဆောငျပေးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/articl e/168962
COVID-19 အတညျပွု လူနာ အမှတျ (၂၉ ) သညျ တောငျကွီးသားတဦးဖွဈပွီး စဝျစံထှနျ ဆေးရုံသို့ လှဲပွောငျးမညျဖွဈကွောငျး ယနေ့ ည ၈ နာရီ ကနျြးမာရေး နှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာန ထုတျပွနျခကျြ အရသိရသညျ။
ထိုသူသညျ အသကျ (၂၆ ) အရှယျ အမြိုးသား ဖွဈပွီး အင်ျဂလနျနိုငျငံမှ မွနျမာနိုငျငံသို့ မတျလ ၂၈ ရကျနကေ့ ရောကျရှိလာပွီး ရနျကုနျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျမှ တဈဆငျ့ မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျရှိ သတျမှတျထားသော facility Quarantine ပွုလုပျရာမှ ဓာတျခှဲ နမူနာ ပေးပို့ စဈဆေးခဲ့ပွီး ပိုးတှရှေိ့ခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျးထုတျပွနျခကျြတှငျ ရေးသားထားသညျ။ လကျရှိအဆိုပါ လူနာ ကို သြှမျးပွညျတောငျပိုငျး တောငျကွီးမွို့ရှိ စဝျစံထှနျးပွညျသူ့ဆေးရုံကွီး လှဲပွောငျးကုသရနျ စီစဉျလကျြရှိပွီး လတျတလော ကနျြးမာရေး အခွအေနမှော ကောငျးမှနျလကျြရှိကွောငျး ထုတျပွနျထားသညျ။
အဆိုပါလူနာသညျ အစိုးရကွငွောခကျြထုတျပွီးမကွာခငျ ယနေ့ ညပိုငျးတှငျ တောငျကွီး စဝျစံထှနျးဆေးရုံသို့ ရောကျနပွေီဖွဈ ကွောငျး ၊ ၄ငျးအားသှားကွိုခဲ့သူမြားအားလညျး Quarantine လုပျရနျ ခြိတျဆကျထားပွီးဖွဈကွောငျး သြှမျးပွညျနယျ ပွညျသူ့ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဒေါကျတာ နှငျးအိဖွူက မီဒီယာမြားသို့ ဖွကွေားသညျ။ https://burmese.shanne ws.org/archives/16119
COVID-19 ကွောငျ့ အမြိုးသားလုံခွုံရေး ထိခိုကျမညျကို စိုးရိမျသဖွငျ့ သြှမျးပွညျအတှငျး ရှိမွို့နယျ ၂၀ ကြျော ကို ကာကှယျရေး ပစ်စညျးမြားထောကျပံ့လှူဒါနျးသှားမညျ ဟု RCSS/SSA က ပွောသညျ။
ထို သြှမျးပွညျ အတှငျးရှိ မွို့နယျ ၂၀ ကို COVID-19 တားဆီးကာကှယျရေး လှူဒါနျးရနျအတှကျ သြှမျးပွညျ ပွနျလညျ ထူထောငျရေးကောငျစီ သြှမျးပွညျတပျမတျော (RCSS/SSA) ၏ ငွိမျးခမျြးရေးဖျောဆောငျရေးကျောမတီ (PMC) အဖှဲ့မှ ဦးဆောငျသှားမညျဟု PMC မှ ကိုယျစားလှယျ ဗိုလျကွီး စိုငျးခမျးဆေး က သြှမျးသံတျောဆငျ့ သို့ပွောသညျ။
“ ဒီရောဂါ ဖွဈလာရငျ တမြိုးသားလုံး ထိခိုကျနိုငျတယျ။ ဒါတှကေ အမြိုးသားလုံခွုံရေး အောကျမှာရှိတော့ အမြိုးသားလုံခွုံရေး ကိုလညျး ထိခိုကျလာနိုငျတယျ” ဟု ဗိုလျကွီး စိုငျးခမျးဆေး က ဆို သညျ။ RCSS/SSA အနဖွေငျ့ လူထုနှငျ့လကျတှဲပွီး အတတျ နိုငျဆုံး ကူညီသှားမညျ ဟု လညျး ဆိုပါသညျ။ https://burmese.shannews.org/archives/16071
ကမ်ဘာမှာ COVID-19 ကပျဘေးရောဂါကွီး ရငျဆိုငျနခြေိနျကာလ မြှျောလငျ့ခကျြထားကွဖို့နဲ့ သှေးစညျးညီညှတျကွဖို့ ကကျသလဈအသငျးတျောရဲ့ ရနျကုနျသာသနာပိုငျ ကာဒီနယျလျ Charles Bo က တိုကျတှနျးလျိုကျပါတယျ။
ဧပွီလ ၁၂ ရကျနေ့ ရနျကုနျ စိနျ့မရေီ ကကျသလကျ ခရဈယာနျဘုရားရှဈခိုးကြောငျးမှာ ပွုလုပျတဲ့ အီစတာပှဲတျောအတှကျ ဗှီဒီယိုမိနျ့ခှနျး တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့ခကျြမှာ ကမ်ဘာမှာ လူပေါငျး သနျးနဲ့ခြီ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျခံနရေပွီး အဲဒီထဲမှာ အီတလီနိုငျငံက ရိုမနျကကျသလဈဘုနျးတျောကွီး အနညျးဆုံး အပါး ၆၀ ကြျော အဲဒီရောဂါကွောငျ့ ပြံလှနျတျောမူခဲ့ကွောငျး ကာဒီနယျလျ Charles Bo က အခုလို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ ဝဒေနာ အပွငျးအထနျ ခံစားနရေတဲ့ လူထောငျပေါငျးမြားစှာအတှကျလညျး အစဉျမပွတျ ဆုတောငျးပေးနကွေောငျးလညျး ကာဒီနယျလျ Bo က ပွောပါတယျ။
COVID-19 ရောဂါကူးစကျမှု ကာကှယျရေးအတှကျ လူအခငျြးခငျြး အနီးကပျ ထိတှမှေု့မလုပျဖို့၊ ဘာသာရေးနဲ့ အခွား လူမှုရေးဆိုငျရာ လူစုလူဝေးနဲ့ ပွုလုပျမှုတှေ တားမွဈထားတာကွောငျ့ ခရဈယာနျဘုရားကြောငျးတှေ ပိတျထားရတဲ့ အခွအေနေ အတှကျလညျး စိတျမကောငျးဖွဈရတယျလို့ ကာဒီနယျလျ Charles Bo က မိနျ့ခှနျးမှာ ထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ မမွငျနိုငျ တဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဟာ လူသားတှကေို သငျခနျးစာပေးခဲ့တယျလို့လညျး သူက ဆိုပါတယျ။ လကျနကျ၊ စဈအငျအားတှေ ကွီးမားတဲ့ ကမ်ဘာ့အငျအားကွီး နိုငျငံတှမှောတောငျ COVID-19 ရောဂါကပျဘေးကို ဒူးထောကျ အရှုံးပေးခဲ့ရတယျလို့ ကာဒီနယျလျ Charles Bo က ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အခုလို ကမ်ဘာ့ကပျဘေးရောဂါကွီးကို လူသားခငျြးစာနာမှု၊ ကူညီရိုငျးပငျးမှုတှနေဲ့ စညျးစညျးလုံးလုံး ကာကှယျနိုငျဖို့ သူ့ရဲ့ မိနျ့ခှနျး မှာ တိုကျတှနျးသှားပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/covid19-charles-bo/5369417.html
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေး ဝနျကွီး၏ လူမှုကှနျရကျတှငျ ရေးသားခကျြ သညျ တိုငျးရငျးသားအခငျြးခငျြး စိတျဝမျးကှဲစသေညျဟုဆိုကာ အရေးယူပေးရနျ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ (SNLD) ပါတီဝငျ လငျးခေးမွို့နယျမှ လှတျတျောကိုယျစားလှယျ သုံးဦးက ရှမျးပွညျနယျအစိုးအဖှဲ့ ဝနျကွီးခြုပျထံသို့ ဧပွီ ၁၂ ရကျတှငျ စာပေးပို့ တိုငျကွားထားကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ရှမျးပွညျနယျအစိုးရအဖှဲ့ဝငျ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဒေါကျတာညီညီအောငျသညျ ဧပွီ ၁၀ ရကျတှငျ COVID-19 ရောဂါကာကှယျထိနျးခြုပျရေး လုပျငနျးကိစ်စဖွငျ့ ခရိုငျ၊ မွို့နယျ ကျောမတီဝငျမြားဖွငျ့ တှဆေုံ့ရနျ လငျးခေးမွို့သို့ ရောကျရှိခဲ့ပွီး တဈညအိပျခဲ့ကာ၊ ဧပွီ ၁၁ ရကျတှငျ ရှမျးလူမြိုးနှငျ့ အခွားတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား အခငျြးခငျြး ကွား မုနျးတီးခွငျးနှငျ့ စိတျဝမျးကှဲခွငျး တဈမြိုးမြိုး ဖွဈပျေါစနေိုငျသညျ့ စာသားမြား ၎င်းငျး၏ လူမှုကှနျရကျတှငျ ရေးတငျခဲ့ခွငျးကို တှရှေိ့ရကွောငျး တိုငျကွားစာတှငျ ရေးသားထားသညျ။
ထိုသို့ ရေးသားခွငျးကွောငျ့ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ (၃၆၄) အရလညျးကောငျး၊ ၂၀၁၅ ခုနှဈ ပွညျထောငျစု လှတျတျော ဥပဒေ အမှတျ (၈) ဖွဈသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား၏ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျသညျ့ ဥပဒပေုဒျမ (၂၄) ပါ မညျသူမြှ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား အခငျြးခငျြးမုနျးတီးခွငျး၊ ရနျမူခွငျး စိတျဝမျးကှဲခွငျး တဈမြိုးမြိုးကို ဖွဈပျေါစရေနျ ရညျရှယျသော၊ သို့မဟုတျ ပျေါပေါကျလာရနျ အကွောငျးရှိသော အပွုအမူမြားကို မပွုလုပျရ အခကျြအရလညျးကောငျး ဥပဒဖွေငျ့ ငွိစှနျးနိုငျ သညျ့ အရေးအသားဖွဈနသေောကွောငျ့ ရှမျးပွညျနယျ ပွညျသူလူထုနှငျ့ လငျးခေးပွညျသူလူထုမြားကလညျး အဆိုပါဝနျကွီး၏ ရေးသားမှုကို သဘောမတူသဖွငျ့ ထိုကျသငျ့သညျ့အတိုငျး အရေးယူအပွဈပေးနိုငျရေးအတှကျ ဝနျကွီးခြုပျက အမွနျဆုံး စီစဉျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျရနျဟု တိုငျကွားစာတှငျ ဖျောပွပါရှိသညျ။
ယငျးသို့ ရေးသားမှုကို ဧပွီ ၁၁ ရကျ ညနပေိုငျးတှငျ ပွနျလညျဖကျြခဲ့ပွီးတောငျးပနျစာ ပွနျလညျရေးသားခဲ့သျောလညျး တိတိကကြသြခြောစှာ တောငျးပနျထားခွငျး မဟုတျဟုဆိုကာ ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးလလေ့ာသုံးသပျသူမြားက ဝဖေနျမှုမြားရှိနသေညျ။ https://news-eleven.com/article/169004
၂၀။ တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ ဖွဈပှားနသေညျ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခမြားကို ခကျြခငျြးရပျတနျ့ရနျ ND-Burma တောငျးဆို
Covid-19 ကပျရောဂါ ရငျဆိုငျနရေခြိနျတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောအနဖွေငျ့ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာ အပဈအခတျ ရပျစဲရေးကို လိုကျနာ၍ တိုငျးရငျးသားဒသေမြား၌ ဖွဈပှားနသေညျ့ တိုကျခိုကျမှုမြားကို ခကျြခငျြးရပျစဲရနျ လူ့အခှငျ့အရေး မှတျတမျးကှနျယကျ(ND-Burma)က ယနေ့ (ဧပွီ ၁၀ရကျ) ကွညောခကျြ ထုတျပွနျ၍ တောငျးဆိုလိုကျ သညျ။
တပျမတျောအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ လုပျပိုငျခှငျ့အာဏာနှငျ့ တညျရှိနမှေုကိုအခှငျ့ကောငျးယူ အသုံးခြ၍ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခ ဖွဈပှားနသေော တိုငျးရငျးသားဒသေမြားတှငျ ပွညျသူလူထုအတှကျ အရေးပျေါ ကယျဆယျရေး လုပျငနျးထကျ စဈတပျ၏ လိုလားခကျြကို ရှတေ့နျးတငျ ဆောငျရှကျနမှေုအပျေါ ရှုတျခကြွောငျး ND-Burma ကှနျယကျက ဆိုသညျ။
ကှနျယကျ၏ ပွောခှငျ့ရ ဒျေါသကျသကျအောငျက “ဒီအခြိနျသညျ ကပျရောဂါဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ အားလုံးပူး ပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ လိုအပျနတေယျ။ အစိုးရ၊ တပျ ၊ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတှေ စသဖွငျ့ ဒါတှသေညျ လကျရှိမှာ Covid-19 ဖွဈနတေဲ့ ကာလမှာတောငျ ရပျတနျ့မှု မလုပျနိုငျဘူးဆိုရငျ ငွိမျးခမျြးရေး အတှကျဆိုရငျ ကမြတို့ ဘယျလိုပုံဖျောကွမလဲပေါ့။ အခုလကျရှိ ကာလသညျ အပဈအခတျရပျစဲထားရမယျ့ ကာလဖွဈတာ တောငျ မရပျစဲနိုငျတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒါကအငျမတနျမှ ပွညျသူ လူထုအတှကျရော တိုငျးပွညျအတှကျရော ဆုံးရှုံး နဈနာမှုတှရှေိနိုငျပါတယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ ရခိုငျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတို့အတှငျ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA) နှငျ့ မွနျမာ့တပျမတျောတို့ အကွား ပဈခတျတိုကျခိုကျမှုပွငျး ထနျလကျြရှိပွီး တပျမတျော၏ လကွေောငျးစဈဆငျရေးမြားပါ အသုံးပွုမှုကွောငျ့ အရပျသား ပွညျသူမြားထိခိုကျသဆေုံးမှုမြားရှိ နသေလို စဈပွေးရှောငျနရေသူ သိနျးခြီရှိနပွေီးဖွဈကွောငျး အရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားက ဆိုသညျ။ အလားတူ အမြိုးသမီးမြား အဖှဲ့ခြုပျ(မွနျမာနိုငျငံ)-WLB ကလညျး ရခိုငျ၊ ခငျြး၊ ကရငျနှငျ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး ဒသေမြားတှငျ တပျမတျောမှ ထိုးစဈဆငျ နမှေုမြားကို ရပျတနျ့ရနျနှငျ့ တပျစခနျးမြားရုပျသိမျးရနျ၊ NCA ပါ အခကျြမြားကို လိုကျနာရနျအပွငျ အပဈအခတျရပျစဲ၍ Covid-19 ကာကှယျရေးအစီအစဉျမြားကို အမွနျဆုံး အကောငျအထညျဖျောရနျစသညျ့ အခကျြ (၉)ခကျြပါ တောငျးဆိုခကျြဖွငျ့ ယမနျ နကေ့ ထုတျပွနျခကျြ တဈစောငျထုတျပွနျ ထားသေးသညျ။
ND-Burmaကို တိုငျးရငျးသားမြား၊ အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ လိငျစိတျကှဲပွားသူမြားကို ကိုယျစားပွုသညျ့ အဖှဲ့အစညျး ၁၂ ဖှဲ့ဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားခွငျးဖွဈပွီး နဈနာသူမြား၏ တရားမြှတမှုရရှိရေးနှငျ့ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုမြားကို ၂၀ဝ၄ ခုနှဈမှစ၍ မှတျတမျး တငျနသေညျ့အဖှဲ့ဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%90%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84 %e1%80%b9%e1%80
မ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID19 ပိုး မွနျမာနိုငျငံတှငျ ပထမဆုံး တှရှေိ့ခဲ့ရသညျ့ ခငျြးပွညျနယျ၊ တီးတိနျမွို့နယျ ကပျတဲလျကြေးရှာတှငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု အားနညျးသောကွောငျ့ စိုးရိမျနရေကွောငျး ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
ကပျတဲလျ ကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးဒိုခနျတှာနျက “သူနဲ့ ဆကျစပျသူတှေ အကုနျလုံး မစဈဆေးနိုငျသေးဘူး၊ ကနျြသေးတယျ၊ အခု ၃၅ ယောကျက အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့နဲ့ လလေ့ာပွီး သူတို့ဖျောပွတဲ့သူတှပေဲပါတယျ၊ ကိုယျ့ဟာကို မပွောထှကျခငျြတဲ့သူက အမြားကွီး ကနျြသေးတယျ၊ အိမျရှငျဖကျကလညျး သသေခြောခြာ မပွောဘူး၊ ပှဲလုပျပါတယျ ဆိုမှ ၃၅ ယောကျနဲ့ ဘယျလို လုပျမှာလဲ၊ ပှဲလုပျတယျဆိုတာကတော့ အကုနျလုံးသိတဲ့အတိုငျးပဲ၊ နိုငျငံခွားက ပွနျလာတာဆိုတော့ ဆှမြေိုး၊ သူငယျခငျြး၊ အမြားကွီးရှိမှာပဲ၊ အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ အခုစိုးရိမျနရေတာ၊ ပွီးတော့ သာမနျလူဖွဈနတေဲ့သူတှေ ကနေ ရောဂါက တှနေ့တေယျဆိုတော့ အရမျးစိုးရိမျရတာပေါ့၊ ပွီးတော့ အစိုးရကလညျး သူတို့ထုတျပွနျခကျြမှာ အဖြားမရှိ၊ အသကျရှူကပျြတာ မရှိဘူးလို့ ဖျောပွတော့ ပွညျသူအခြို့က ရောဂါမရှိဘူးလို့ပဲ ယုံကွညျကွတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ယငျးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး ကပျတဲလားကြေးရှာရှိ Lock down ခခြံရသူ အားလုံး ကနျြးမာရေး စဈဆေးဖို့ မလိုကွောငျး ခငျြးပွညျနယျ အစိုးရအဖှဲ့ လူမှုရေးဝနျကွီး ပေါငျလှနျမငျထနျက ပွောသညျ။ ဝနျကွီး ပေါငျလှနျမငျထနျက “ရှာထဲက လူတှေ တော့ အကုနျလုံးစဈဖို့ မလိုပါဘူး၊ သူတို့လညျး အခုထိ ကနျြးကနျြးမာမာပဲ နတေယျ၊ ပွီးတော့ နိုငျငံတကာ သကျမှတျခကျြမှာ
လညျး ၂၁ ရကျလုံး စောငျ့ကွညျ့ရမယျ၊ ရှာထဲက လူတှလေညျး ပိုးဘာမှမတှရေ့ငျတော့ တဈရှာလုံးကို ဖွလြှေော့ပေးလိုကျ မယျ” ဟု ပွောသညျ။
ဦး ဒိုခနျတှာနျက “အခုပထမဆုံးတှရှေိ့သညျ့ လူနာနဲ့ ဆကျစပျသူ ၁၃ ဦးကို စဈဆေးတယျ၊ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျး ၃ ဦးပါတယျ၊ အဲ့ထဲမှ လူနာမိခငျကပါနတေယျ၊ သူဆိုရငျ ရောဂါလက်ခဏာ ဘာမှမပျေါဘူး၊ သူနဲ့ ဆကျသှယျတဲ့ စောငျ့ကွညျ့တဲ့ဟာက ၃၅ ယောကျပဲဖွဈနတေယျ၊ တကယျတော့ အကုနျလုံးကို စဈဆေးသငျ့တယျ၊ အစိုးရဖကျက ၇ ရကျစောငျ့ကွညျ့ဖို့ သကျတမျးတိုး တော့ ကြှနျတျောတို့က စောငျ့ကွညျ့အဖွဈ နဖေို့လိုတယျ၊ နောကျဆုံးတှတေဲ့သူကိုလညျး တီးတိနျပွညျသူ့ဆေးရုံကနေ လူနာ တငျကားနဲ့ လာချေါနပွေီ” ဟု ပွောသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-72183
ယခုရကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ လကျနကျ၊ခဲယမျးမြား ဆကျတိုကျဖမျးဆီးရမိကာ တရားခံ တယောကျ မြှ မမိကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
သြှမျးပွညျမွောကျပိုငျး ကှတျခိုငျမွို့နယျ လှယျခမျးကြေးရှာတှငျ ဧပွီ ၉ ရကျ မနကျပိုငျးက ဦးချေါကြားဝမျ နအေိမျအတှငျး မူးယဈဆေးဝါး နှငျ့ လကျနကျပစ်စညျးမြား တနျဖိုးငှကေပျြ ၂.၇ ဘီလီယံကြျော (ကပျြသနျးပေါငျး ၂၇၀ဝ ကြျော) သိမျးဆညျးရ မိကွောငျး မူးယဈ ရဲတပျဖှဲ့မှ သိရသညျ။ ထိုမူးယဈဆေးဝါး နှငျ့ လကျနကျမြားကို နအေိမျတှငျ သိမျးဆညျးရမိသျောလညျး တရားခံမှာ လှတျမွောကျနဆေဲဟု သိရသညျ။ သိမျးဆညျးရမိသညျ့ လကျနကျပစ်စညျးမြားမှာ ကညျြအိမျ ၈ ခု၊ M22 ကညျြ ၁၂၃ တောငျ့၊ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား၊ ဘိနျးဖွူ၊ ဘိနျးစိမျး တို့ ဖွဈသညျ။ “ အခုရကျပိုငျး ကှတျခိုငျမှာ မူးယဈဆေးတှေ ဆကျတိုကျ ဖမျးဆီးရမိတယျ။ ဒါပမေယျ့ တရားခံ မမိဘူး။ ထူးဆနျးတယျ။ မူးယဈဆေး၊ လကျနကျတှကေ အိမျထဲကနေ သိမျးရမိပမေယျ့ တရားခံကတော့ ပြောကျနတေယျ” ဟု ကှတျခိုငျမွို့ အမညျမဖျောလိုသညျ့ ဒသေခံ တဦး က ပွောသညျ။
မူးယဈဆေးဝါးဖမျးဆီးရသညျ့ ကိစ်စတှငျ ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုမရှိကွောငျး၊ တရားခံလှတျမွောကျနသေညျ့အပျေါ မေးခှနျးထုတျစရာ မြားနကွေောငျး ကှတျခိုငျမွို့ လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူမြားက ပွောသညျ။ “ လှယျခမျး၊ ကောငျးခါး ဘကျမှာ အိမျတိုငျးလိုလို မူးယဈဆေးရှိတယျ။ မူးယဈဆေးမိပွီး တရားခံ လူမမိတာတော့ မဖွဈသငျ့ဘူး”ဟု ကှတျခိုငျမွို့ နထေိုငျသညျ့ မဘောကျ က ပွောသညျ။
ကှတျခိုငျမွို့နယျအတှငျး ဖဖေျောဝါရီ ၂၈ ရကျမှ ဧပွီ ၉ ရကျထိ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ ဆကျစပျသညျ့ ပစ်စညျး တနျဖိုးငှေ ၄၁၄ ဘီလီယံကြျော သိမျးဆညျးရမိကွောငျး မူးယဈရဲတပျဖှဲ့ မှ ထုတျပွနျထားသညျ။ https://burmese.shannews.org/archive s/16090
ရခိုငျပွညျနယျ၊ စဈတှမွေို့ အနောကျမွောကျဘကျ မွနျမာ့ ပငျလယျပိုငျနကျအတှငျး တရားမဝငျ ရောကျရှိလာသညျ့ ငါးဖမျး စကျလှေ ၆ စီး ကို မွနျမာ့ တပျမတျော(ရေ)မှ သတိပေး ခွောကျလှနျ့ ပဈခတျခဲ့ရသဖွငျ့ စကျလှတေစီး အနညျးငယျ ထိခိုကျ ပကျြစီးပွီး ရလေုပျသား ၆ ဦးခနျ့ ထိခိုကျဒဏျရာမြား ရရှိသှားခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။
ဧပွီလ ၇ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီခှဲတှငျ မွနျမာပိုငျနကျ နှဈနိုငျငံ နယျစပျမဉျြး၏ ၃ မိုငျမှ ၆ မိုငျကှာအတှငျး ဝငျရောကျလာသညျ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ငါးဖမျး စဈလှေ ၆ စီးကို မွနျမာဘကျက မီးအခကျြပွခွငျး၊ အသံခြဲ့စကျဖွငျ့ အသံပေး ချေါဆိုခွငျး၊ ဆကျသှယျ ရေးစကျမှ ရပျတနျ့ရနျ ပွောဆိုခဲ့သျောလညျး ရပျတနျ့ခွငျး မရှိ၍ ယခုလို သတိပေးပဈခတျခဲ့ရခွငျးဖွဈကွောငျး တပျမတျောမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဗိုလျမှူးခြုပျ ဇျောမငျးထှနျးက ပွောသညျ။
သို့သျော တပျမတျော(ရေ)က ယငျးဖွဈစဉျကို ထို့နညေ့ ၁၁ နာရီခှဲ တှငျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ရတေပျ စဈရယောဉျ BNS-Somu dra Avijan(F-29)မှ စဈရယောဉျ မှူး ဗိုလျမှူးကွီး အယျလျဆာထံသို့ ဆကျသှယျပွောကွားခဲ့ရာ ၎င်းငျးမှ အဆိုပါ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ငါးဖမျးရယောဉျမြားနှငျ့ ဆကျသှယျ၍ မေးမွနျးထိနျးသိမျးသှားမညျဟု အကွောငျးပွနျကွားခဲ့ကွောငျး တပျမတျောမှ သတငျး ထုတျပွနျသညျ။ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့သညျ မွနျမာနှငျ့ ကမျးရိုးတနျး ထိစပျသညျ့နသေညျ့ နိုငျငံတခုဖွဈပွီး ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျး ပွဿနာမြားကွောငျ့ ထှကျပွေးသှားရသညျ့ ဒုက်ခသညျမြားအရေးဖွရှေငျးရနျ မွနျမာအစိုးရသညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နှငျ့ဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျရနျကွိုးစားနရေသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/short-news/2020/04/12/2 20535.html
ကခငျြပွညျနယျအတှငျး နယျလှညျ့ပွီး လူထုကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုမြားကို စဉျဆကျပွုလုပျလာခဲ့သညျ့ ကခငျြနယျလညျ့ ကြောပိုးအိတျကနျြးမာရေးလုပျသားအဖှဲ့ KBPHWT သညျ ယခုခြိနျ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈရောဂါကာကှယျရေးအတှကျ ပွနျလညျ လုပျဆောငျနပွေီဟု သိရသညျ။ နှဈပေါငျးမြားစှာ အစိုးရကနျြးမာရေးဌာန ရောကျရှိမှုနညျးပါးသော ကြေးလကျဒသေမြားသို့ Kachin Back Pack Health Worker Team အဖွဈ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျမှုလုပျဆောငျခဲ့ပွီးနောကျ ယခုခြိနျ အရပျဖကျ အဖှဲ့အစညျးမြားဖွငျ့ ပူးပေါငျးကာ လူနမှေု ထူထပျသော မွဈကွီးနားမွို့အနီးတဈဝိုကျ စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ ရောဂါကွိုတငျ ကာကှယျတားဆီးရေး လုပျငနျးမြားကို ဆောငျရှကျပေးနကွေောငျး သိရပါသညျ။
“ကနြျောတို့က ကိုဗဈနဲ့ ပတျသကျပွီး အဓိက လုပျဆောငျတဲ့ နရောတှရှေိတယျ။ အဲ့ထဲမှာ စဈရှောငျတှနေဲ့ ပွညျတျောပွနျတဲ့ သူတှကေို ဦးတညျပွီး လုပျဆောငျပေးတယျ။ မွဈကွီးနားမွို့မှာရှိတဲ့ စဈရှောငျစခနျးတှမှော ပိုးသတျဆေးသှားဖနျြးပေးတာ တှကေို လုပျဆောငျပေးတယျ။ ပွညျတျောပွနျတဲ့ သူတှကေို ကိုဗဈနဲ့ပတျသကျပွီး အမွငျဖှငျ့ပေးတာတှေ လုပျပေးတယျ။ လိုအပျတဲ့ ဆေးကုသမှုတှကေို သှားရောကျလုပျဆောငျပေးတယျ” ဟု KBPHWT တာဝနျခံ Mr.Zet ပွောဆိုသညျ။
အစိုးရ၏ Covid-19 ကာကှယျတားဆီးလုပျဆောငျခကျြမြား အားနညျးနသေေးသညျ့အတှကျ တဈဖကျတဈလမျးမှ အားဖွညျ့ရနျ ရောဂါကွိုတငျကာကှယျရေးအဖွဈ လုပျဆောငျလာခွငျးဖွဈသညျဟု Kachin State Covid-19 Prevention Network မှ ကိုပေါလု ယခုလိုပွောဆိုသညျ။ “အခုဖွဈပှားနတေဲ့ ကိုဗဈ-၁၉က ကမ်ဘာမှာ ကူးစကျပြံ့နှံ့တာလညျး အခြိနျတဈခုကွာလာပွီဖွဈ တယျ။ ကနြျောတို့ရဲ့ဒသေက ဆငျးရဲတဲ့ ဒသေတဈခုဖွဈတယျ။ ကွိုတငျကာကှယျမှုတှေ အမြားအပွား ပွုလုပျရမယျဖွဈတယျ။ တကယျလို့ ဖွဈလာရငျလညျး အစိုးရကထိထိရောကျရောကျ လုပျဆောငျပေးနိုငျမှာမဟုတျဘူးဆိုတာ ကွိုသိနတေယျ။ ကိုယျ့ လူမြိုးကိုကာကှယျဖို့ ကနြျောတို့မှာ တာဝနျရှိတယျဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကခငျြပွညျနယျမှာရှိတဲ့ အဖှဲ့အစညျးအားလုံးပူးပေါငျး ပွီးနိုးဆျော လုပျဆောငျနတောဖွဈတယျ”ဟု ပွောဆိုသညျ။
Kachin State Covid-19 prevention Network တှငျ ကခငျြနယျလှညျ့ကြောပိုးအိတျကနျြးမာရေးလုပျသားအဖှဲ့ (KBPHWT)၊ Kachin National Youth Network ၊ All Kachin Youth Union (AKYU)၊ KSPP ၊ Kachin Democratic Woman league ၊ Ram Hkye ၊ Kachin Democratic Institute(KDI) ၊ IDP ၊ Mung Chying Rawt Jat ၊ Kachin Development Networking Group(KDNG) နှငျ့ WHG စသောအဖှဲ့အစညျးမြား ပါဝငျသညျဟု သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/ 2020/04/13/covid-19%e1%80%90%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%8
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ဘုရားသုံးဆူမွို့ မှနျပွညျသဈပါတီတပျစခနျးတညျရှိရာ ဂပြနျရတှေငျးနှငျ့ ကွံတောရှာ ရာဘာတောထဲတှငျ ဧပွီလ ၉ ရကျနကေ့တညျးက သောငျတငျနသေညျ့ နရေပျပွနျ မွနျမာနိုငျငံသား ၁၃၇ ဦးကို လှတျတျောကိုယျစားလှယျနှငျ့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားက သှားရောကျချေါယူခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
မန်တလေး၊ ပဲခူး၊ နပွေညျတျော၊ ဧရာဝတီ၊ တနင်ျသာရီ၊ မှနျပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျအသီးသီးမှ ပွနျလညျရောကျရှိလာသူ မွနျမာ နိုငျငံသား ၁၃၇ ဦးကို ဧပွီ ၁၁ ရကျနကေ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျနှငျ့ လူမှုအဖှဲ့မြားမှ မှနျပွညျသဈပါတီအဖှဲ့ တာဝနျရှိသူထံ သှားရောကျညှိနှိုငျးခဲ့ပွီးနောကျ ယမနျနေ့ ဧပွီ ၁၂ ရကျတှငျ ဘုရားသုံးဆူမွို့သို့ ပွနျလညျချေါဆောငျလာပွီး ကနျြးမာရေး စဈဆေးမှုမြား ပွုလုပျဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျဟု ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့နယျ အမြိုးသားလှတျတျောကိုယျစားလှယျ စောရှား ဖောငျအှာက ပွောသညျ။ “မှနျပွညျသဈပါတီစခနျးဘကျက ပွနျလာရငျ သူတို့တှကေို နရောစီစဉျပေးထားကွဖို့ မနကေ့ စခနျးတာဝနျရှိသူနဲ့ သှားရောကျ ညှိနှိုငျးမှု လုပျခဲ့တယျ။ ရှာတှမှော ပေးမဝငျကွတော့ ရာဘာပငျအောကျမှာ ၂ ည အိပျခဲ့ရတယျ ပွောတယျ။ သူတို့အခု ဘုရားသုံးဆူ နယျစပျဂိတျမှာ ရောကျလာပါပွီး” ဟု ယနေ့ (ဧပွီ ၁၂ ) ရကျတှငျ ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ပွနျလညျရောကျရှိလာသူမြားထဲမှ မှနျပွညျနယျအတှငျး နထေိုငျသူမြားကို ၎င်းငျးတို့၏ပွညျနယျအစိုးရထံ လှဲပွောငျးပို့ဆောငျ ပေး သှားမညျဖွဈပွီး ကရငျပွညျနယျနှငျ့ အခွားတိုငျးဒသေကွီးအသီးသီးမှ နထေိုငျသူမြားအား ဘုရားသုံးဆူမွို့စာသငျကြောငျးနှငျ့ ကွာအငျးဆိပျကွီးမွို့စာသငျကြောငျးမြားတှငျ နရောသတျမှတျထားပွီး ကနျြးမာရေးစောငျ့ကွညျ့မှု ပွုလုပျသှားမညျဟု တာဝနျရှိသူမြားထံမှ သိရသညျ။
ထိုငျး-မွနျမာနယျစပျ ဘုရားသုံးဆူဂိတျတှငျ မတျလ ၁၅ ရကျနကေ့ ပွညျပမှ ပွနျလာသူမြားကို ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှုမြား စတငျဆောငျရှကျပေးနပွေီး ယနအေ့ခြိနျထိ ထိုငျးနိုငျငံမှ ပွနျလညျရောကျရှိလာသူ မွနျမာနိုငျငံသားမြား နစေ့ဉျ ဝငျရောကျလာ သေးသညျဟု နယျစပျဂိတျတှငျ ကနျြးမာရေးစဈဆေးမှု ပူးပေါငျးအဖှဲ့မြားထံမှ သိရသညျ။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%91%e1%80%af%e1%80%ad%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80